A zana muzana resipi yekuzvigadzirira, ine yakakosha kuravira. Hove dzakachinjika kwazvo, dzinogona kubikwa, dzakarohwa, dzakabikwa kana ...
Cabrillas yakabikwa nemadomasi uye ham
Iyo nzira yatinopa kwauri nhasi, kunyangwe ini pachangu ndisingade kudya iyi mhuka zvachose, yakajairika kupfuura zvese ...
Imhandoi yekofi dalgona kofi? Ndakazvibvunza mubvunzo mumwe chete iwo mavhiki mashoma apfuura, pandakaona achitaurwa muma network angu. Zvino,…
Zvisungo: 4 tbsp. tablespoons pasi kofi 8 tsp. yeshuga 3/4 yetita yemvura 200g. yemukaka kirimu magirazi mana ewhiskey ...
Jamaican Kofi, iri nyore nzira izere nekuravira. Kofi yeJamaican musanganiswa wekofi neRamu uye kirimu yakarova, zvinofadza chaizvo.…
Irish mocha kofi
Kune mhando dzakawanda dzekofi zvekuti zvinoita sekunge hazvigone kudzidzira dzese. Senge kuti izvi zvaive zvisina kukwana, munyika yega yega uye kunyangwe mukati meimwe chete ...
Kofi nechingwa zvine mafuta neshuga, Andalusian mangwanani
Pataive tiri vadiki taigara tichizvidya, kungave kwekudya kwekuseni pakupera kwevhiki pakange pasina kukurumidza kukuru nekuti pakanga pasina chikoro kana chekudya, ...
Nhasi makeke, kana muffin ane chando, uye makeke pops, kana chipanji keke malollipop, ave nenzvimbo chaiyo mumhemberero uye ...
Ngatigadzirirei Keke pops. Zvakanaka kuita nevana vedu vadiki. Kune vana zvinonakidza uye kana ivo vachitora chikamu zvakanyanya. What…
Keke-pops ine chokoreti
Keke-pops ine chokoreti mamwe maswiti anonakidza akakodzera mapati ekuzvarwa, vana vanopenga. Ndiyo nzira yakapusa, kuzadza kuri ...
Nhasi ndinokuunzira imwe inonaka uye ine hutano imwe pasita iyo isingazokusiye usina hanya. Iwe unoda here kutarisira iyo tambo asi zvinokutorera iwe zvinotyisa ...
Zucchini ine prawns
Isu tinoenderera mberi nechinangwa cheyakagwinya uye akareruka mapikicha, akanakira kwete emhando yekudyira. Mune ino kesi chikafu chinonaka kwazvo, che ...
Wese munhu anoziva kuti miriwo ndizvo vanhu vanofarira zvishoma, uye mageteti ndiwo anodhura zvakanyanya ...
ZVINOKUDZWA: 3 zucchini. 150 gr. yesoft cheese. 1 hanyanisi yakatemwa. Munyu uye mhiripiri, Oiri. 2 zvidimbu zve ham. Maitiro: - Bika zucchini ...
Zucchini yakaputirwa neAurora muto
Zucchini imuriwo watinoshandisa zvakanyanya kuitira, zvese kugadzirira mafuta, uye kuperekedza pasita ndiro kana masaladi. Ini zvakare kujairira ku ...
Zucchinis yakazadzwa nehove ye tuna
Nhasi ndiyo nzira yemuriwo, ino nguva inoperekedzwa ne tuna. Tuna relenos zucchini chidya chinotyisa kwazvo chemhuri yese, ...
Zucchini yakaputirwa ne tuna nechizi
Nhasi ndinokukurudzira kuti ugadzirire mabikirwo atinowanzoshandisa kumba kupedzisa kudya kwedu kwemanheru: zucchini yakaiswa tuna ne chizi.
Zucchini yakaiswa mushwa
Muvhiki isu tinozotanga kunakirwa neKisimusi yekutanga kudya uye kudya kwemanheru. Mumavhiki apfuura tanga tichikurudzira mabikirwo akasiyana uye isu tinoramba tichidaro! ...
Shrimp yakakoswa zucchini
Nhasi tiri kuzogadzirira iri nyore uye ine nzira yekubika iyo mhuri yese inoda. Shrimp yakakoswa zucchini chikafu chinonaka kwazvo ...
Tiri kuzogadzira squid inonaka a la romana, sedhishi, kutanga kana se tapas kana apitisi, ihove inonaka. Kune ino resipi isu tine ...
Squid negariki, ndiro yakakwana kwazvo, yakapfuma uye yakapusa. Yakakangwa squid yakanaka kwazvo, asi kana tikaaperekedza nemuto ...
Artistic squid ine Lemon uye Garlic Vinaigrette
Nhasi tava kuzogadzira chinonaka, chetsika asi chazvino. Imwe inonaka squid izere nekuravira iyo ichaita kuti tinakidzwe nemisanganiswa zvizere ...
Squid pamwe fries
Ndiro yanhasi yakanaka kune avo vanoda mafafitera egungwa. Izvo ndezve squid ine mbatatisi yakakangwa, yakanakira kudya kwemasikati kwe ...
Zvokudya zvegungwa mu salsa
Squid mumuto, nzira yakapusa yatinogona kugadzira setapa kana kuigadzira sedhishi rinoperekedzwa nemupunga wakabikwa. Izvo chaizvo ...
Squid mualmond muto
Squid muamondi muto, dhishi risinganetsi rine muto unonaka. Icho chikafu chatinogona kugadzirira kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, ...
Squid muonion muto
Nhasi ndinokumbira imwe squid mumuto weanisi, yakapfuma uye yakapusa kugadzirira. Squid chikafu chegungwa chatinoda zvakanyanya, isu tine tsika ...
Squid mumuto wayo
Squid mumuto wayo inogona kuva nzira inobatsira kwazvo yekuperekedza chero imwe yekudya kana sekosi yechipiri mushure mechimwe chinhu ...
Squid muingi yayo, ndiro yakanaka kwazvo, iri nyore kugadzira. Squid muinki ndeyechinyakare Basque nzira, tinogona kuwana ndiro iyi ...
Iwo squid anyanisi ndeyechinyakare yegastronomy yedu. Chidimbu chakareruka cheavo munhu wese chaanofarira uye chisingasanganisi chero ...
Squid nehanyanisi muwaini chena
Mufiriji yangu pane nguva dzose squid, ese ari muchimiro chemhete kuti apinze mupunga nemiriwo yemiriwo, uye yakazara kugadzirira mabikirwo akadai ...
Nhasi ndinokuunzira iyo recipe yedhishi inoita kuti muromo wako udire nekutarisa chete, kunyanya kune avo vedu vanoda ...
Squid yakakanyiwa nenyama
Nhasi tinogadzirira squid inonaka yakaiswa nyama. Chikafu chakanakira chikafu chemafaro uye chinotaridzika zvakanaka nevashanyi vedu. Ndiro ndiro…
Cauldron yaMurcian yevatangi
Nhasi ndaisa kunhuwirira kweMar Menor patafura neiyi inoshamisa Murcian kapu yevatangi. Kunyangwe tichiida, hazvidiwe ...
Zvinongedzo (vanhu vashanu): 5 mavhavha eakachekwa goriki 6 paprika 1 kirogiramu yegwayana kana nyama yenguruve zvimedu 1 yetea yetea curry Oiri ...
Sezvatinoziva, hove ine mikana isingaverengeki yemuviri. Nhasi ndiri kuenda kuzokupa nzira yekubika iyo yandakadzidziswa naambuya: mupfumi ...
Nhasi tava kuzogadzira dhishi risingakwanise kushaikwa mune chero imba, muto wakanaka wehuku. Iyo yakapusa nzira iyo ine zvimwe zvakanaka ...
Kuchenesa muto pakurwiswa kwemvura
Ndiani ari pane chikafu pano? Pane chero munhu ane fluid fluid? Nekuti iyo yekubheka iyo yandinounza nhasi yakatsaurirwa kunyanya iwe! Ari…
Nekufora kwemafaro eKisimusi isu tese takasangana na "Dr. Báscula" uye akatiudza kuti isu tinofanirwa kupora ...
Calzones, yakajairika nzira yekuItaly
Mhoro! Nhasi ndinokuunzira yakajairika nzira yekuItaly, mamwe anonaka macalzone ane ham, chizi uye matomatisi. Calzones hachisi chinhu chinopfuura pizza ...
Zvisungo: 1 kilo ye shrimp yakachena. 50 magiramu yemafuta. 1 clove yegariki yakambodimburwa. 1 girazi rebhurandi. 4 tablespoons emafuta. piri…
Shrimp ine rum
Iwe unoda kushamisika mumwe wako? Zvakanaka, gadzirira izvi zvinonaka rum shrimp: Zvinosanganisa: 20 shrimp 1 mukombe weJamaican nhema rum 1 clove ye ...
Campero, chikafu chamangwanani chemisha yeSierra de Cádiz
Mutaundi rega rega mune yechinyakare gastronomy mune yega yega dhishi ine chaiyo yakasarudzika flavour inoitika yenzvimbo. Naizvozvo, nhasi uno ...
Nhasi ndanga ndichida kugadzirira iri nyore nzira yekuti iwe ushamise vana vako panguva yekudya. Mazhinji acho akashandiswa kugadzira ...
Zvakanaka, ndinotarisira kukushamisa nhasi neresipi iyi: Zvinosanganisa mazana matatu magiramu emushowa mutsva 300 gramu yetirairi 70 teaspoon yeparsley ...
Canape yenguruve nyoro uye brie chizi
Svondo rino ticharamba tichipa mazano pamusoro pemhemberero yeKisimusi inotevera. Iyo yenguruve nyoro uye brie canape iri nyore asi ichizadza chinyadzo.…
Ini ndinopa kwauri iyo yekubheka yeinonakidza uye yakapusa inopisa inotangisa. Gadzirira iyo chero chiitiko: Zvinongedzo: 1 yekupedzisira chingwa mayonnaise 2 yakachekwa zvakaoma-yakabikwa mazai ...
Canapes naDhiyabhorosi Hamu
Aya canapes akapfuma kwazvo uye akapusa kwazvo. Iyi yekubheka inogona kuitwa nerubatsiro rwevadiki mitezo yemhuri: Ingredients Imwe ...
Nguva pfupi yapfuura tava kusvika pakuziva madhishi mazhinji kumba ane eggplant pakati pezvinhu zvavo. Iyo gadheni rave nerupo gore rino uye isu tinofanirwa kutora mukana wayo…
Iyi nzira yakapusa uye yakatwasuka haigone kupotsa kana zvasvika kune yakazara entree, pati kana chiitiko chakakosha: Ingredients Pulp puree ...
Canapes e minced ham uye prawns
Pfungwa yanhasi ndeyekugadzira yakapusa uye nyowani canapés kuti ishande seanotapira kana kutanga kune anotevera ezhizha chikafu. Maviri canapés zvakananga: iyo ...
Cream cheese uye prawn canapes
Iyi ndeimwe yema canapes asingabe nguva yako; unogona kuvaita vakagadzirira mumaminitsi mashanu. Izvo zvakanaka kana vanhu vazhinji vakaungana ...
Canapes echizi uye salmon yakasvuta nerosemary
Isu tadzoka kare mushure mekisimusi; Iwo anga ari mazuva akaomarara mukicheni asi zvave zvakakodzera. Vakakushamisa neresipi here? Me…
Mushroom uye garlic canapes
Iyo howa uye gariki canapes zviri nyore kwazvo, zvakakwana kushanda sekutanga iyi Kisimusi. Kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako, ichi ndicho chimwe ...
Vazhinji vevana vajaira kuve nekudya kwemangwanani uye kunwa zvekudya pazvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kubheka bhizinesi Maswiti aya akagadzirwa kubva kune akawanda ...
Puff pastry canes naNutella
Nhasi ndinounza mamwe mapundu echipfuva akakwenenzverwa neNutella, iri nyore nzira yatinogona kugadzirira munguva pfupi. Ivo vanozivikanwa zvakare seNeapolitan, chipfuva ...
Tuna cannelloni, inonaka pasita dhishi kune wese munhu
Kugona chose! Nhasi ndinokuunzira kamukira iyo yauri kuda, imwe inonaka tuna cannelloni mune bechamel muto. Pasita chikafu ...
Sipinachi mazambiringa uye pine nzungu cannelloni
Sipinachi raisin uye pine nut cannelloni ndiro nyore, rinokurumidza kugadzirira uye rakanaka kwazvo. Chikafu chakanakira isu sekutanga, kana sendiro imwe chete.…
York ham uye zai cannelloni
Cannelloni anowanzo kuve chikafu chakavakirwa pasitara pasita iyo yakaputirwa nechero kuzadza. Nekudaro, kudzikisa mashoma iwo ...
York ham cannelloni nesipinashi uye mapine nzungu
York ham inokurudzirwa pakudya uremu, asi iwe unofanirwa kuve unogadzira kuti ugadzire madhishi akafanana neayo atinopa ...
Seafood cannelloni pane howa coulis, gorgonzola chizi uye walnuts
Kune vanhu vana kana vatanhatu. Nguva 4 awa 6 maminitsi Zvinosanganisa: 1 mahwendefa e cannelloni 30 g yemapereti akachekwa 12 g yemonfishfish 400 ...
Zhizha cannelloni, nzira yakakwana yekushandisa iyi kupisa imwe inotonhora yezhizha cannelloni. Mimwe inotapira ham mipumburu yakaputirwa neyakajairwa saradhi ...
York cannelloni ine tapín uye serrano ham
York kana turkey ham pamwe neSerrano ham zvikafu zvine hutano zvekudya kwekurema, nekuti havana ...
Cannelloni yakakanyiwa nenyama uye madomasi akagadzirwa
Kugadzira cannelloni kana lasagna kumba kuti tidye dzimwe nguva kunonetsa, asi kana isu takaita kamwe kamwe pfungwa mumisoro yedu nemidziyo ...
Mari yepasta pamunhu
Nguva zhinji ndinoshamisika kuti yakawanda sei kuverenga yeiyi kana chikafu chekudya kwemanheru kubva nguva zhinji kana ini ndinogara ...
Puff pastry uye cream eel
Puff pastry chinhu chinobatsira kwazvo mudzimba dzese nekuti nehafu yeawa chete tichidonhedza tinogona kugadzira dhizeti inonaka ...
Yakakangwa macapons ane rosemary mbatatisi
Makondoni haana kujairika mukicheni mangu, zvakanyanya kushandiswa kusunungura-renji huku. Nekudaro, sekutaura kunoita chirevo, "kamwe a ...
Mashells akazadzwa nechokoreti
Mashells akaiswa chokoreti, yakapusa uye yakapfuma dhizeti yekuperekedza kofi. Ne 2 zvigadzirwa isu tinogadzirira inonaka dhizeti. Ndatokuudza ...
Hozhwa mumuto, yakajairika Cádiz recipe
Nhasi ndanga ndichida kugadzirira yakajairika zhizha yekubheka iyo yakagara inogadzirwa mudunhu reCádiz. Iyo nzira yekubatira iyo inoshanda seanotapira ...
Kana iwe uri mudiwa wepasta uye chikafu chisingachinjiki, pamwe nhasi uri mumwe wevanofara zvinhu pachiso che ...
Kune vanhu vanoda, ini ndinopa chidyiro chiri nyore uye chinonaka kune vanoda chikafu chakanaka.Zvinongedzo 450gr chiuno kana rump 250cc kirimu 300gr howa 300cc ...
Nyama yakabikwa nemadomasi muto
Kana iwe wagadzira muto wenyama, yakapusa uye yakajairika nzira yekutora mukana wekubika nyama iyi iri nyore nzira: Nyama yakabikwa ne ...
Kana paine mabikirwo atinonyanya kufarira, iyi Nyama ine madomasi. Hongu, idhishi rakapusa, asi nderekuti zviri nyore ...
Nguruve pamwe nemadomasi
Nguruve nematomatisi, yakapusa, isingadhuri dhishi iyo yakanaka kwazvo. Vana vanofarira sosi yemadomasi, saka ndiro iyi ...
Vevha nemiriwo uye lettuce yegwayana
Nhasi tinogadzira yakapusa dhishi yemombe nemiriwo. Chikafu chakakodzera mhuri yese icho chisingatore nguva yakawandisa uye ...
Nyama mumuto nematezi
Nguruve imwe yenyama ine chakaburitsa zvakanyanya, zvinoenderana nekuchekwa kwayo, chiuru uye rimwe mabikirwo anogona kugadzirwa. Nhasi…
Nyama mumuto wemuriwo
Mhoroi vanhu vese! Ini ndinofunga inguva yekutanga kuti ndikununurire keke ye nyama pano, yaive nguva ... kutanga mune ino ...
Iyi nyama yekuzadza ichakuburitsa kubva kunopfuura kamwe kukurumidza paunenge uchigadzira, semuenzaniso, maabergines akazadzwa nenyama, artichokes, ...
Minced nyama yepasta
Nhasi tinokuunzira nzira yakapusa inokutorera nguva shoma uye ichakubatsira iwe kupa hwakapfuma kuravira kune yako macaroni, spaghetti ...
Nyama pamusoro pembatata dzakabikwa uye bhekoni
Iyo minced nyama inova chikafu chine muto kwazvo uye chinogadzirika kwazvo paunenge uchigadzira yakawanda yemadhishi, nekuti kana yakarungwa zvakanaka inogona ...
Pineapple carpaccio neuchi uye mazambiringa akaomeswa
Iyo pineapple carpaccio ine huchi uye mazambiringa akaomeswa zhizha dhizeti. Chiedza uye chinozorodza, iri nyore uye inokurumidza nzira yekupedza ...
Nguruve Cheeks ine Prawns uye Scampi
Nhasi tichazogadzira kamukira yakapfuma icho chiri chinhu chakakosha uye zvirokwazvo vashoma venyu vanoifarira. Nguruve kana nyama yemombe matama chikamu ...
Yakarukwa nyama yenguruve matama nembatatisi
Nhasi ndinokuunzira ichi chinonaka uye chechinyakare dhishi cheSpanish chikafu, chakarukwa nyama yenguruve matama nembatatisi. Kudya kwakagara kuchishandiswa mu ...
Yakabikwa nyama yenguruve matama
Matama inyama yakapfava uye ine muto kubva kumeso kwenguruve, zvakare iri nyama isingadhuri yatinogona kugadzirira dzakasiyana ...
Vevha matama muPorto muto
Nhasi ndinokuunzira kamukira yezviitiko zvakakosha. Aya ndiwo matama evhavha muPorto muto. Ndiyo nzira yakagwinya kwazvo yakaperekedza ...
Puff pastry matama
Aya matama ndeye yakanyanya, yakapusa nzira ... iyo yatinozove huru, kunyangwe tichida masikati akanyarara nekuti inononoka kugadzira. The…
Clam casserole ne cuttlefish mumuto
Nhasi tiri kuenda neyakanaka dhishi, clam casserole uye cuttlefish ine muto, dhishi rine mavara kwazvo rine hove dzegungwa, dzatinogona kugadzirira ...
Shrimp mupunga casserole
Murairi nemaprawuni ndiyo yakajairwa nzira muSpain, nekuti mupunga chikafu chakapfuma chinodyiwa zvakanyanya, kunyanya ...
Cod casserole neapuro
Nezvatinoona zvakatarisana nemhemberero dzeKisimusi dziri kuuya, tinoramba tichipa mazano matsva. Mapepa akafanana neiyi yekodhi ine apple, yakapusa asi inokwanisa kushamisika ...
Mbatatisi uye howa tsuro casserole
Tsuro casserole, mbatatisi uye howa, chikafu chakazara kwazvo, svutugadzike yetsuro. Iyo inonaka uye yakapusa uye ...
Wild nguruve casserole ine chestnuts
Zvisungo: 1Kg yenguruve yemusango ½ Kg yemachestnuts 4 hanyanisi 1 punipuni yevhiniga 3 clove yegariki 2 bay mashizha Oregano 1 kapu ...
Tenderloin casserole ine howa mupunga
Musanganiswa wakasarudzika, mwenje uye wakanakira mazuva anotonhora uye neanoda mukanwa, iyi resipi inokurumidza mumaminitsi makumi mashanu uchave nayo uye ...
Mbatata uye leek casserole
Iyo mbatatisi uye leek casserole iyo yatinogadzirira nhasi iri nyore nzira iyo iwe yaunozviita iwe kuti ushande muchoto. Isu tinongofanirwa kugadzirira ...
Hove uye prawn casserole
Nhasi ndinokuunzira hove casserole ine ma prawns. Chikafu chinonaka chaunogona kugadzirira mazororo aya. Shiri yehove yakapusa. Iyi casserole ye ...
Green huku casserole
Kunopisa, asi kune husiku hwatinogona kuzvigutsa. Kana iwe uri kuzvitarisira iwe, dzivisa kugara uchiguma muchitonho saladi, wadii kudya zvine hutano zvakasikwa ...
Chicken casserole nemucheka wakasvibira
Iyi kamukira yakapfuma kwazvo uye inoyedza, inogadzirwa mumaminitsi makumi mana nemashanu uye unenge uine casserole yakanaka kuti iwe uve mubiki anoomberwa zvikuru.…
Broccoli casserole gratin ine chorizo
Zvino iwo matsutso ari kutenderera kukona, ini ndawana chikonzero chakakwana chekugovana newe imwe neimwe ye "zvishamiso ...
Yakabikwa mbatatisi uye zai casserole
Kana, sezvandinoita, iwe uchida zvinhu zvakapusa, iwe uchafarira ichi chikumbiro. Iyi nzira yezai ine mbatatisi yakabikwa ndiyo imwe nzira yeku ...
Shiraplant casseroles ne parmesan
Ndinoda biringanya; Icho chinhu chandinoisa mumidziyo yakasiyana kwazvo. Imwe yedzinokurumidza nzira dzekugadzirira iyo iparmesan, mu ...
Caramelised onion ndiyo nzira yakakosha mumabhuku ese ekubika. Iyi yekubheka ichashanda sehwaro hwemarudzi ese edhishi: anotangisa, anofizisa, masaladi, ...
Haisi chokwadi chekuisa kuperekedza nyama dhishi? Hechino chikafu chedu chakabikwa hanyanisi, nzira yakachinjika uye yakakurumbira yekuperekedza ...
Hanyanisi, celery uye karoti vinaigrette
Mavhaigrette akanaka anoperekedza madhishi akasiyana siyana anoenda zvakanaka nemasangweji anoperekedza mutsvuku uye chena nyama ndiro yemiriwo inowedzera kunaka kwekudya kwako. Munhu wese…
Celiacs: gluten-isina chokoreti alfajores ne dulce de leche
Iyo nzira yandinopa kwauri inoita imwe sarudzo yekuravira, nekuti inogadzirwa nezvikafu zvinokodzera maecliacs zvachose-asina giriniki uye anonaka ...
Celiacs: mupunga pudding yevana vasina gluten
Iyi inovaka-isina muto mupunga pudding dhizeti yatinogadzira inogadzirirwa kunyanya kune vadiki vari mumba uye inzira ku…
Celiacs: gluten-isina mabhara ezviyo
Iyi kamukira yakagadzirirwa vese avo vanotambura nekusagadzikana kweguteni, ichiva chikafu chinotapira chinogadzirwa nezvikafu zvinobvumidzwa kuitira kuti vagone ...
Celiacs: gluten-isina mafuta chipanje makeke
Tichagadzira nzira yakapfava yemabhisikiti ane mafuta kuitira kuti ma celiacs ese agone kunakidzwa pasina kunyimwa chikafu chamangwanani kana chidya chinogadzirwa ne ...
Celiacs: mabhisikiti akanaka ane guten
Kune ese celiacs, nhasi tichagadzirira nzira yakapusa uye inonaka yemakeke anonaka kuravira chero nguva yezuva, kunyanya ku ...
Celiacs: yakapfava chipanje keke nehuchi-husina huchi
Iyo yakapusa nzira iyo yatichagadzirira inonyanya kukodzera kune avo vese vanorwara nechirwere checeliac uye nekuda kwechikonzero ichi, isu hatigone kurega kuzvinyima ivo vega ...
Celiacs: gluten-isina chokoreti mabhonasi
Iwo mabhokosi echokoreti atichagadzirira nhasi iri nyore nzira yekugadzira, kuve chikafu chine kuravira kunonaka kune avo vese vanotambura ...
Celiacs: gluten-isina sipinashi pudding
Iyi nzira yakagwinya yesipinashi pudding yakanyatsogadzirirwa vese avo vanorwara nekusashivirira kweguteni sezvo yakanyatsogadzirwa ...
Celiacs: gluten-isina karoti pudding
Nezvakatenderwa uye zvakapusa zvekudya kuve nazvo mukicheni medu, isu tichagadzirira yakasarudzika karoti pudding kune ese celiacs, inosanganisa neiyi nzira zvese ...
Celiacs: machipisi asina guten
Chips madiki mabhanzi ayo anonaka kwazvo kushandira nekuzadza kwakasiyana paunenge uchigadzirira zvisina kurongwa kutanga uye nekuda kweichi chikonzero ucha ...
Celiacs: quince paste pachingwa chisina-gluten
Nhasi ini ndichakudzidzisa maitiro ekugadzira iyi inonaka quince kunama pane chingwa chisina guteni kuitira kuti eseeliacs agone kunakirwa neoast ...
Celiacs: fainá neupfu-husina pea hupfu
Ini ndinopa yekukurumidza uye yakapusa nzira yekugadzirira iyo inonaka fainá, asi mune ino kesi isu tinoshandisa pea furawa iyo isina gluten uye ...
Celiacs: fainá neupfu-husina chickpea furawa
Tichagadzirira vese avo vanorwara nechirwere cheiliac nzira inonaka uye yakapusa yezviyo fainá kuitira kuti vagogona kuiravira sekutanga mu ...
Celiacs: gluten-isina mahwendefa echibage
Kuti tinakidzwe chero nguva yezuva, isu tichagadzirira zvinovaka muviri guten-isina mabhisikiti echibage kune ese celiacs, akagadzirwa zvizere nezvikafu zvinobvumidzwa uye ...
Celiacs: gluten-yemahara inotapira makuki evana mu thermomix
Ini ndinokupa iri nyore nzira yemakeke anotapira kuitira kuti iwe ugone kugadzira neiyo thermomix kuitira kuti eseeliacs anakirwe, kunyanya vana ve ...
Celiacs: gluten-isina katsi rurimi makuki
Tichagadzirira eseeliacs mamwe makuki anonaka anonzi marimi ekatsi, ayo anonaka kuenda nawo, panguva yekudya kana kana ...
Celiacs: gluten-isina buckwheat stew ine artichokes
Buckwheat kana buckwheat ibwe rekunyepedzera rine zvinovaka muviri uye kunyanya mapuroteni zvivakwa zvisina kana guten, zvichiita chikafu chinotenderwa uye ...
Celiacs: gluten-isina kupatsanurwa bhanana ice cream
Kugadzira ayizi kirimu inoyevedza isina gluten, tichashandisa mabhanana kana mapainini sekudya kunovaka muviri, ichiita dhizeti inotapira uye inozorodza. Zvishandiso: 3…
Celiacs: yakakosha bundu yeiyo gluten-isina ma noodles
Homemade noodles akagadzirwa mumba medu chikafu chakanakira vese celiac kuravira uye nekuda kweichi chikonzero ini ndichakudzidzisa iwe kugadzirira ...
Celiacs: gluten-isina bhomba bundu
Ini ndichakudzidzisa maitiro ekugadzirira iyo yechinyakare isina guten-bhomba bundu kune ese celiacs, kuti vagone kuravira ino inonaka inotapira sangweji neyakareruka ...
Celiacs: gluten-isina mahwanda echikafu mu thermomix
Kune vese avo vanotambura nekusashivirira kweguteni, nhasi ini ndinofunga kuti ndigadzire iri nyore nzira yekusaguta-isina puff pastry, ndichishandisa ...
Celiacs: gluten-isina cannelloni bundu
Nhasi ndinofunga kuti ndigadzire iri nyore uye yakagwinya nzira yekuzvigadzira isina-guten-isina cannelloni bundu rinoumbwa nezvikafu zvakakwana maeceliacs kuti ugone ...
Celiacs: gluten-isina ravioli bundu
Neye ino isina-giraidhi yemahara maceliacs unogona kugadzira mukanyiwa weinonaka ravioli nekuzadza kwakasiyana senge nyama, huku kana ...
Celiacs: gluten-isina manhanga gnocchi
Tichagadzirira chikafu chine hutano uye chakareruka chevanhu vese vanorwara nechirwere chechiliac vachishandisa manhanga sechikafu chakakodzera, ichiita chikafu chine hutano ne ...
Celiacs: gluten-isina beet gnocchi
Isu tichagadzirira irinyore isina-gluten-isina maresipi kune avo vese vanorwara nechirwere checeliac kuti vanakirwe seyakakura dhishi uye voiperekedza nemasosi akasiyana kana ...
Celiacs: gluten-isina munyu tudiki tudiki
Tichishandisa hupfu husina guteni uye sitachi, nhasi tichagadzirira zvinonaka zvemunyu zvetieliacs dzese kuti vafarire neyekutanga kana inofadza ...
Celiacs: gluten-isina chapatí chingwa
Tichagadzirira nzira yakapfava yezvingwa zvekudya zvinodyiwa kunyanya muIndia isina gluten zvachose, kuva zvinonaka kuravira nekupfeka, kirimu chizi, ...
Celiacs: chingwa chine upfu hwegluten-husina kucono
Nhasi ndinofunga kugadzira chingwa chinovaka muviri neguturu-isina chuu furawa, ichiita chikafu chakakosha kuti chipinze mukudya kwechiliac uye ne ...
Celiacs: gluten-yemahara yakasarudzika chibage chestarch chingwa
Chingwa chisina kugadzirwa chisina guten chatinogadzirira nhasi kune eseeliacs ane starch yechibage uye thyme kuitira kuti vagogona kuchiravira pasina kushaya ...
Celiacs: chingwa chisina guteni neupfu hwe soy
Aya mabhanzi anotenderera neupfu hwe soya chikafu chinovaka muviri uye chine hutano kune vese avo vanotambura nekusashivirira kweguteni, sezvo akagadzirwa ...
Celiacs: Gluten-isina peya keke
Kana iwe uchirwara nechirwere chechiliac iwe zvirokwazvo unoda akasiyana maerekisheni. Nhasi ndinofunga kugadzirira iri nyore uye yakakosha recipe yeese celiacs nechikafu chisina ...
Celiacs: gluten-isina chokoreti pionono (yakakodzera)
Iyo yekubheka inotapira iyo isu tichagadzirira kune ese celiacs ndiyo yakasarudzika pionono bundu kwandakange ndawedzera yakakodzera cocoa pakati pezvakagadzirwa ...
Celiacs: gluten-isina chibage kana polenta pizza
Kuti ese celiacs afare, isu tichagadzirira chikafu chakafanana ne pizza, kuve kugadzirira kwakakodzera kwevhiki kunoumbwa ne ...
Celiacs: gluten-isina mbatatisi pizza
Tichagadzirira vese avo vanotambura nekusashivirira kweguteni nzira inonaka yemazamu pizza, ichiva imwe sarudzo yekuravira izvi ...
Celiacs: gluten-isina kubheka poda
Sezvo isu tichiziva akasiyana mafurawa kana sitachi iyo celiacs inogona kudya haina gluten, isu tichagadzirira irinyore nzira iyo ichabatsira kwazvo ...
CELIACOS: Recipe yemakuki emvura
Nhasi ndinopa yakakosha recipe yeecliacs sezvo yakaitwa isina gluten. Edzai uye mundiudze. Zvisungo: 1 mukombe wemufarinya starch ...
Celiacs: gluten-isina scones mu thermomix
Scones chikafu chakasimba kwazvo cheecliacs kuti vanakirwe pakudya kwemangwanani kana tudyo uye neiyo thermomix tichaigadzirira mu ...
Mango yakakanyiwa nyama yenguruve
Uku kudya kwekunzwa marate chete, uye kuti iwe uve sahosi. Zviwanikwa 2 inobata 8 yenguruve muchiuno medallions Munyu, ...
Zviyo nebhanana pakudya kwemangwanani
Kudya kwemangwanani chinhu chatinotora zvakanyanya kumba. Iko hakuna kushaikwa kwekushomeka kwemhando yakanaka yemaranjisi mutafura uye inoenderana ...
Huku neeki tswanda
Mhoro wakanaka! Zvekare, vaine mutinous imba vashanyi vakasunganidzwa vakakomberedza jira rako repatafura kuti iwe udye? Zvino on ... show off (so ...
Chingwa chakachekwa, ham uye mabhasikiti evha
Iyi yekubheka ine zvinhu zviviri zvakanaka, kureruka kwayo uye kunakirwa kunokonzerwa nekuvhura dengu uye kutyora zai. Isu tese tinoda izvo ...
Chakavimbiswa chikwereti! Nezuro pataive tichigadzirira iyo yakasviba kumashure uye isu tichitaura nezve mashandisiro ayo mazhinji ekubika, ndakakuudza kuti nhasi tichagadzirira zvimwe ...
Zvinosanganisira Mushroom, 400 g (112 Kcal) Spray oiri, inodiwa huwandu (10 Kcal) Garlic cloves, 4 (10 Kcal) Yakatemwa parsley, 4 maspuni munyu, a ...
Garlic howa ne ham
Garlic howa ne ham, yakapusa uye yakapfava dhishi. Iyo yekubheka iyo inobatsira sekutanga, seinotapira kana seyokuperekedza kune chero imwe ...
Yakabikwa howa nemon uye thyme, yakaitwa mumaminitsi gumi nemashanu
Iyo howa inoenderana zvakanaka; Navo unogona kugadzira sauces inonaka inozoshanda sekushongedza nyama tsvuku kana pasita ndiro. Kunyange zvakadaro,…
Handei nehumwe howa hwechingwa, chikafu chiri nyore uye chinokurumidza kugadzira. Yakanakira kugadzirira aperitif kana kuperekedza chero nyama ndiro kana ...
Howa hwakazara na ham
Howa chikafu chakapfuma kwazvo muZhizha, sezvo nacho tinokwanisa kugadzira mabikirwo akawanda, kungave kirimu, sekuzadza, sekusauteed, ...
Tuna stuffed howa
Howa dzakazadzwa netuna, yakanakira appetizer kana yekutanga kune aya mazororo. Iwo mahowa matsva akanaka kwazvo, tinogona kuvagadzirira zvakasiyana-siyana, zvinoenda zvakanyanya ...
Mbeu dzakaputirwa naSerrano ham
Iyo howa chakuvhe chine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvine hutano izvo zvinobatsira kwazvo kune hutano hwedu. Iwo ane hombe muzana yezvakakosha zvicherwa zve ...
Charlota weaubergines uye nyama
Mazai anodyiwa nenzira dzakawanda, akagochwa, kubikwa, kukwizwa, kubikwa, kuputirwa, nezvimwe. Dzinonyanya kushandiswa ndidzo dzakakamirwa, asi nhasi tinokuratidza ...
Peas nezai uye ham
Kana ndikakuudza kuti dhishi yanhasi mamwe mapizi ane zai neha (pasina kutarisa pikicha), pamwe hauzive zvandiri kuita ...
Nhasi ndinokuunzira ino inonaka nzira yakagwinya, squid mumuto. Chikafu chinonaka uye chiri nyore kugadzirira, icho chauchazowana hwaro hwevamwe ...
Squid mumuto weonion, dhishi risinganetsi iro isu tinogona kugadzirira pamberi. Inokurumidza uye ivo vakanaka kwazvo. Squid vanobva kumhuri ...
Squid mumuto wedoro
Squid mumuto wedoro, ndiro yatinogona kugadzira munguva pfupi uye tovasiya vakagadzirira pamberi. Doro rinopa iro rakasiyana kunaka ...
Squid nehanyanisi, yakanaka inoperekedzwa nemupunga
Iyi kamukira inopa yakawanda yekutamba, iine iyo inonaka muto, iyo pint yekugadzirwa pamusoro penzvimbo uye yechinyakare moto ... Iyo squid, kana iyo ...
Squid yakanamirwa mumuto
Kune maKristu panguva yePasika zvinokurudzirwa kuti vasadye nyama nemusi weChishanu, nekuda kwekumirira, ndosaka ...
Ini ndinokupa iwe chidimbu chekugadzirira mamwe manhanga machipisi, akakodzera kuunza seanotangisa: Zvekushandisa: 800 g yemapungu akachekwa uye pasina mhodzi 2 ...
Dzimwe nguva zvinofadza zvinoreva kutemwa nemusoro kana tichigadzirira menyu, nekuti tinogara tichiwira mukutenga kwakafanana, maorivhi, ...
Ini ndinokupa iwe yakapfuma sarudzo kana zvasvika kubhengi kuperekedza mhando dzese dzenyama: Zvinongedzo: 6 Chibage chidiki nehusiku Oiri ...
Nhasi ndarota ambuya vangu vachitsanangura nzira iyi yavakandigadzirira ndichiri mudiki, saka ndazvibvunza kuti: Sei usinga ...
Chocolates nemichero yakaomeswa
Makokoreti ane michero yakaomeswa, dhizeti yakapusa uye yakapfuma kwazvo, nzira yekushandisa. Kana iwe uine chero zvakasara zvakaomeswa michero kubva kuzororo ...
Chorizos muwaini chena. Nhasi ndauya neyakareruka uye inonaka recipe, yakanaka skewer kana tapa, ndeyechinyakare kwemazuva ano ezhizha.
Pistachio Yakapwanyika Gwayana Chops
Vaya venyu vari kufunga kupemberera nemhuri uye / kana shamwari pati pamatanda ako kana mubindu uchitora mukana wemamiriro ekunze akanaka, cherekedza iyi recipe! ...
Gwayana riri mumba mangu rakafanana nepati, chimwe chinhu chekupemberera. Iyo inoshandiswa pazviitiko zvisingawanzoitika, kazhinji yakagochwa muchoto nenzira yechinyakare, ...
Turkey cutlets nemarmond muto
Iyo yemazuva ano nzira ndeyevaya vedu vanoda nyama ine hutano asi inonaka: turkey cutlets ine almond muto. Ari…
Churrasco ine pepper muto
Kana rimwe zuva tikagadzira huwandu hwakawanda hwenyama uye tine zvakasara, zvinogara zvakanaka kuzvichengeta, nekuti zuva rinotevera rinogona kugara richiitwa ...
Churrasco yakaporeswa nezvinonhuwira
Iyi yekubheka muenzaniso wakajeka wekuti nezvidimbu zvina kana zvishanu tinogona kugadzira chikafu chinonaka uye chiri nyore. Inogona kutorwa sedhishi ...
Homemade churros, akapfuma zvakapfuma zvekudya kwekuseni
Iko hakuna kwakakwana Svondo yekudya kwekuseni pane iyo yakanaka mukombe yechokoreti inopisa ne churros. Izvi zvinondiyeuchidza nezvehudiki, apo baba vangu vakatimutsa ...
DZVINHU ZVINODA TEPI
INGREDIENTS: Nguruve loin tepi, kirogiramu, zvimwe kana zvishoma, muchidimbu. 2 hombe anyanisi, 2-3 makarotsi, 2-3 akaibva matomatisi, mavhavha maviri e ...
TETA TEPI NEMAAPLE COMPOTE
INGREDIENTS: - Nguruve yakasungira tepi muchidimbu chimwe (huremu hunotarwa newe zvichienderana nemari yaunodya imwe neimwe uye nhamba ...
Tenderloin tepi mu mushroom muto
Ndiro yanhasi, siribhoni ribhoni mumushonga wemushroom, yakanaka kumhuri yese. Iyo tepi yechiuno ndeye ...
Microwave plums musirasi
Tichashandisa iyo microwave, kugadzira mumaminetsi mashoma, iyi yakapusa nzira yeplums musirasi uye kuishandisa mumadhiri, kuzadza makeke kana kuishandisa kwe ...
Cherry clafoutis, dhizeti yemwaka
Iye zvino sezvo iwo mabikirwo ave paakanakisa, isu hatigone kuvapotsa. Clafoutis keke rakajairika reFrance rinotibvumidza isu kutamba neiyi ...
Peach clafoutis, iri nyore dhizeti
Muzhizha, tinonakirwa nemhando dzakasiyana dzemichero yemwaka pamusika. Gadzira masmoothies kana uasanganise mumadhiri ari nyore seiyi clafoutis, ...
Yakarohwa mazai vachena
Iwe unoziva, iyo yakajeka yakarohwa kusvika padanho rechando imwe inogara ichivaita neziso uye havatombove vakaomarara sezvingaite munhu angade, asi ... Ndinoziva sei ...
Peach cobbler ne ice cream
Ndinokukurudzira kuti utange kupera kwevhiki nekugadzirira iri dhizeti. Pamwe izwi rekuti shangu harizivikanwe kwauri, asi harifanire ...
Orange topping yemakeke echipanji
Iyi iresipi yakapusa yaunogadzira kana iwe uchida kuvhara keke nekukurumidza, usina nguva yakawanda mukicheni ...
Nhasi ndinokuunzira coca yamaarumondi. Nezvishoma zvigadzirwa tine ino coca yekuperekedza kofi, tudyo kana sedhiri. Hapana chinhu…
Caramelized hanyanisi coca
Kupera kwemwedzi uye zvishoma kana kushaya chinhu mufiriji? Iwe unoda mhinduro inokurumidza uye yakapusa yekudyisa dzimwe shamwari dzakaratidza ...
San Juan iri kusvika, mutambo unopembererwa mumaguta akati wandei muSpain. MuCatalonia pati iyi inofambidzana nemamwe macocas akanaka kwazvo, ...
Kirimu keke, yakapfuma yakapfava uye yakasvinwa keke chipanje. Iyo mukanyiwa ine muto uye yakapfava. Aya macoca ari kugadzirira mafaro e ...
Sausage Coca, yese yekuMediterranean inonaka mumuromo mako
Vhiki rino ndanga ndichiedza nemavhenekeri matsva uye mabikirwo ekugovana newe. Uye, ini ndakada chikafu chetsika ...
Frankfurt Coca uye Cherrys
Mhoro wakanaka! Nhasi ndinogovana newe iri nyore kwazvo, inonaka mabikirwo akakwana einwiwa neshamwari kana yekuzvigadzirira kumba kwemaviri. With…
Puff pastry keke ine ngirozi bvudzi
Nhasi ndinokumbira iwe puff pastry keke izere nengirozi bvudzi, yakapusa, yakachipa uye inokurumidza kugadzirira. Puff pastry inonyanya kushanduka kana ...
Puff pastry keke nechokoreti nemaamondi
Puff pastry nechokoreti nemaarumondi, koka yekugadzirira kumapati eeverbena, mazuva ekuberekwa, kana kungoita dhizeti huru yekupedzisa kudya. ...
Puff pastry keke nechokoreti kirimu nemaamondi
Puff pastry keke nechokoreti kirimu uye puff pastry, yakakura uye yakapusa dhizeti kugadzirira. Zvino sezvo mutambo weSan Juan wave kusvika ...
Puff pastry keke nemiriwo yakakangwa
Tiri kuenda kunogadzira puff pastry coca ne escalivada, crispy, yakagadzirirwa coca ne escalivada yeabergines uye mhiripiri yakagochwa. Chikafu chine hutano ...
Puff pastry neapuro, yakasarudzika dhizeti ine yakanaka kwazvo mhedzisiro. Munguva pfupi uye nezvishoma zvigadzirwa tinogona kugadzirira iri keke re ...
Puff pastry nematomatisi
Tiri kuenda kunogadzira puff pastry keke nematomatisi, inonaka uye inotonhorera coca. Sezvo Zuva raValentine richiswedera, chikafu chinokachidza chicha ...
Puff pastry keke nemiriwo yakabikwa
Puff pastry nemiriwo yakabikwa, iri nyore nzira, yakanaka yekuvandudza kudya kwekukurumidza neshamwari. Kugadzirira iyi coca nemiriwo tinoda ...
Puff pastry keke nemiriwo uye chizi
Nhasi puff pastry coca nemiriwo uye chizi. Koka kuti unakirwe mukupera kwesvondo nemhuri. Kumba tinoda kugadzirira pizza ...
Puff pastry uye chokoreti keke
Iyo yakanaka coca yeSan Juan, puff pastry uye chokoreti. Husiku hweSan Juan hwave kusvika, munzvimbo zhinji hunopembererwa nevanodzima moto ...
Puff pastry uye keke kirimu
Puff pastry nekirimu, coca inonaka ine pastry cream. Zvino kwauya iyo mhemberero uye iyi coca yakanakira kugadzira, zvakare yakanakira ...
Iyo coca de llanda ndiyo yakajairika calencian coca, yakanaka kwazvo pakudya kwekuseni kana tudyo. Iyi nzira imwechete inogona kugadzirwa ne yogati, ...
Nhasi tinogadzirira coca yemuriwo, iri nyore nzira yakanaka kwazvo uye yakafanana zvikuru nepitsa. Izvo zvakanaka kugovana ...
Karoti uye walnut coca
Nhasi ndinokumbira iwe karoti uye walnut coca, chipanji, chine coca sezvo karoti ichiwedzera hunyoro kukeke uye izvo zvinoita ...
Mediterranean Coca, nzira yakagwinya yemhuri yese
Nhasi ndinokupai recipe yechinyakare kubva kuNorth West chikamu cheSpain, kunyanya kubva kuCatalonia. Iyi yekubheka iri yepasirese uye yakafungidzirwa ...
Kunyangwe tiri kuva nenguva yechando isina kujairika muSpain (kutonhora kudiki, kunaya zvishoma, nezvimwewo) panguva ino yegore, tinogara tichinzwa sekunge tine ndiro inodziya yekupusha.…
Nyemba chena dzakabikwa
Pamazuva anotonhora hapana chimwe chinonakidza kupfuura yakanaka inopisa chipunu dhishi. Unofarira bhinzi chena here? Kwete ini…
Mbatata yakabikwa nenyama
Iresipi yanhasi ndeimwe yeanowanzoitwa imba yega yega. Kana uine nyama, ingave huku kana nyama yemombe, uye uine ...
Miti yemiriwo ine chickpeas
Sei zvichidaro kuti vanaamai vese vatidzidzise kubika yakanaka yemuriwo ine chickpeas kutanga? Zvakanaka, vanotidzidzisa ...
Zvisungo: 200 g yenyama yechirobheri 2 mashupuni etomato muto 100g yemapeche akachekwa 1/2 mukombe wemayonnaise 1…
Avocado uye crab stick cocktail
Avocado uye crab stick cocktail, nyowani uye isinganetsi nyeredzi, yakanaka kutanga mutambo wepati. Kugadzirira cocktail sekutanga kunowanzo kufarirwa, ...
Zvisungo: 1 jeti yegrenadine manyuchi 4 cl. yemuto weorenji 1,5 cl. yeAmaretto 1,5 cl. yekognac Kugadzirira: Isa zvese ...
Roast yenguruve knuckle
ZVINODZIDZISWA (vanhu vaviri): - vhoriyamu yemagetsi inorongedzwa kana kutengwa nyowani. Zvese izvi zvinoshandiswa kana iwe ukatenga zvitsva, sezvo vacuum inouya yatove ...
Buds neavocado uye anchovies
Isu takapedza svondo tichigadzira inotonhorera inotonhora inotanga: buds neavocado uye anchovies. Zvichida ikozvino isu tinoda zvimwe kutora kuruma kumiromo yedu ...
Buds ine anchovies uye chizi
Nhasi mutsva nyowani uye wakareruka, mapundu ane anchovies uye chizi. Kudya uku kwakagadzirirwa munguva pfupi, kwakanaka sekutanga, kugadzirira ...
Microwaved karoti bhudhi
Uchiri kurangarira iyo microwave karoti iyo yatakakudzidzisa iwe kugadzirira munguva pfupi yapfuura? Nhasi tichazvishandisa zvakare kugadzirira mwenje uye unozorodza Starter: ...
Lettuce mabukira nemaeels
Kunyangwe mamiriro ekunze akanaka ari kupfuura, iwe uchiri kuda kudya zvinhu zvitsva uye zvine hutano, kunyanya husiku, iwe usinga ...
Dzimwe nguva zvinonetsa kwazvo kuti tiite nzira yekukurumidza iyo, panguva imwechete, ine hutano, sezvo zvakajairika kushandisa lettuce ...
Kabichi nemapaprika mbatatisi
Kabichi nemapaprika mbatatisi, iri nyore nzira iyo inogadzirirwa ine mashoma mashoma zvigadzirwa. Ndiro yemiriwo yakakosha isu kwekutanga ...
Monkfish Miswe ine Makomba neMushroom
Monkfish, hove inodhura asi inonaka, inotipa nzira dzakawanda dzekuigadzira, mumuto, yakabikwa, yakarohwa, nezvimwe. Nhasi ndichabatanidza gungwa uye ...
Yakakwira Cholesterol: Zucchini Zucchini Croquettes
Kune avo vese vanotambura necholesterol yakakwira, zano yanhasi nderekugadzirira mamwe macrocquettes anofadza zukini zucchini kuti ivo vafarire sekutanga ...
Koliflower al ajoarriero
Mukicheni hamugari mune chinetso. Kune mabikirwo ane zvidiki uye zvakapusa zvinongedzo zvinotipa musanganiswa unonaka wezvinonhuwira.…
Yakabikwa cauliflower nemazuva uye nzungu
Koliflower muriwo watinokwanisa kuwana zvakawanda panguva ino yegore, kana tichiuwana mumisika yese. Inogona…
Koliflower yakabikwa nemhiripiri
Paive nemwaka wandainakidzwa nekugadzira madhishi akawandisa. Mumakore apfuura, zvakadaro, ndinovachengetera zviitiko zvakati uye kubheja zuva nezuva ...
Bakuliflower yakabikwa pamwe nemadomasi muto uye parmesan
Miriwo haisi nyore nguva dzose kubika kumba. Kune nguva dzose nhengo dzemhuri dzinomupikisa uye "dzinokumanikidza" ...
Koliflower nehuku uye Mushroom Curry
Sezvatakambotaura pane dzimwe nhambo, kana iwe uri pane chikafu iwe unofanirwa kurodza kufunga kwako kuti ugone kunakidzwa nemabikirwo ayo akati siyanei zvishoma zvichingodaro ...
Koliflower nebechamel muto
Nhasi tichagadzirira ndiro yeholiflower uye mbatatisi. Cauliflower imuriwo watinodya zvishoma kunyangwe chiri chikafu chakapfuma mu ...
Iyo yekubheka iyo yatinopa kwauri nhasi Chipiri iri nyore kwazvo kugadzira uye panguva imwecheteyo iri yakanaka. Kana iwe usingade iyo ...
Koliflower ine tomato muto uye maamondi
Cauliflower inodyiwa kumba vhiki rega rega uye isu tiri kugara tichiedza kutsvaga nzira nyowani dzekuigadzira. Vamwe vanoda iyi nzira yekolifulawa ne ...
Koliflower kana gratin ine béchamel muto
Nhasi tiri kuenda nendiro yekoliflower kana gratin ine béchamel, yakapfuma, ine hutano uye iri nyore kugadzirira dhishi. Koliflower ndiwo muriwo unodhura ...
Koliflower gratin ne béchamel muto uye ham
Iwe unotova nemenyu yeKisimusi yakavharwa here? Kumba kwedu hatina kana chakavharwa. Hatizive kana tese tichigona kuungana uye kana achizove nemutoro saka ...
Spicy cauliflower yakasungwa nemaamondi
Kupera kwevhiki kuri kutanga uye ndosaka nhasi ndafunga kukupa iyo nzira izere nesimba, misiyano uye kuravira. Nhasi chi ...
Yakarohwa koliflower muriwo waunoda kana kuvenga. Asi, cauliflower haina kunyanya kufarirwa, hwema hwayo haufadze zvakanyanya. Ndinofunga kuti vazhinji ...
Yakarohwa koliflower ine zvinonhuwira tomato muto
Zuva rinonaya senge nhasi rakaringana kugadzirira iyi koliflower yakarohwa nezvinonhuwira matomatisi muto. Sei? Nekuti kunyangwe iyo yekubheka iri nyore ...
Yakabikwa muswe nekirimu muto
Chirongwa chanhasi ndechekugadzirira ndiro yakasarudzika yechikafu uchishandisa akachekwa evhavha senge rump muswe uye ...
Monkfish miswe ine hove dzegungwa
Nhasi tinokuunzirai yechipiri dhishi nekunhuhwirira kwegungwa ... Hove uye hove dzegungwa, mubatanidzwa wakapfuma, wakanakira avo vanoda zvinonaka izvo ...
Monkfish miswe nekirimu nemapine nzungu
Iwe unoda kamukira inokurumidza uye inonaka? Zvakanaka, gadzirira iyi monkfish miswe nekirimu uye pilones. Iwe hauzodemba. Zvisungo: 1 bunch of garlic clove ...
Maitiro ekubika chigamba
Kana isu tine kudya kwemanheru uye muenzi ari pane chikafu, hapana zvirinani kupfuura yakanaka yeGalician dandemutande gamba, ndokuti, zvakasikwa, ndeimwe ye ...
Nzira yekuita bone turkey
Maitiro ekugadzira FRENCH FRIES NEMAFUTA MAFUTA
Tinotora mbatatisi kana dzichinge dzasvuurwa, tinozvicheka mumakamuri madiki kana nechipunu chisina chinhu tinotora mabhora embatatisi. Sunga mabhora embatatisi ...
NZIRA DZEKUGADZIRA ADOBO YEMAHOSI PASINA KABHUKU KUMUNYU
ZVINODZIDZISWA: - ndimu - mavhavha - gariki - paprika KUGADZIRIRA: Mugirazi yetireyi tinoisa maviri kana matatu magirazi emuto wemonimu akaderedzwa ...
Nzira yekugadzirira sirasi nekognac
Iyo sirasi inogona kushandiswa puddings, custards, makeke, puddings, chipanji makeke, matete mace uye compotes: Zvinongedzo 1/2 mukombe weshuga 1/2 mukombe ...
Kugadzirira sei huku inonaka mumatope
Kana iwe uine mukana wekukwanisa kutenga kana kusimudza huku isina mahormone akawanda sekuwana kwatinoita musupamaketi, unogona kugadzira dhishi chairo ...
Maitiro ekugadzirira mamwe echanquettes akaomeswa
Nhasi tichagadzirira inokurumidza uye inoshanda aperitif. Chekutanga pane zvese, iwo majasi ekunaya haana kugezwa, iwe unonyatsoisa hupfu hwakawanda mundiro uye enda ...
Nzira yekuziva sei kana vise raibva
Kunze kwekunaka uye kuzorodza kwazvo, vise rinewo hutano uye rakadzika macalorie: pamwe ndokusaka chiri muchero ...
Mashandisiro ekushandisa Thermomix mumakicheni emazuva ano
Isu tinoziva kuti nenguva dzazvino zvinopfuura kuomarara kushandisa maawa pamberi pechitofu kuti uwane chinonaka chekuisa ...
Plum compote mu microwave
Kugadzirira dhizeti ine hutano mumaminetsi mashoma, ini ndinofunga kugadzira iyi inonaka plum compote mu microwave, kunhuhwirira panopera chikafu ...
Nhasi ndinopa imwe yeakareruka uye anodhura mabikirwo ekugadzira uye ayo anoverengeka mashandisiro. Izvo zvakanaka kuti uperekedze madhiri ekusanganisa ...
Imwe yemadhishi akapfuma uye akapusa kugadzirwa ndeye apple compote, zvichibva pane uyu muchero isu tinowana mhedzisiro inotapira iyo ...
Apple compote nesinamoni
Zvinhu zvakapusa zvinowanzo kuve zvakapfuma. Uye hapana chinhu chakareruka sekugadzira compuro yemuapuro uye kuinatsa nesinamoni; ...
Kana tichida kugadzirira dhizeti ine hutano mumaminetsi mashoma, ini ndinokurudzira kuti uite apurosiuce inonaka mu microwave, kunhuhwirira wega kana ne ...
Compote yemaapuro, mapeya uye claudian plums
Zvinhu zvishoma zviri nyore sekugadzirira compote. Yakawanda tsika ndeye apuro, iyo yatove chikamu chebhuku redu rekubika. Kunyange zvakadaro,…
Tsuro casserole mumuto
Tsuro casserole mumuto, yakapusa uye inokurumidza dhishi kugadzira, yechinyakare mabikirwo. Tsuro inyama ine hutano, i ...
Tsuro ine Garlic
Uye zvekare zvakare ndinouya neresipi yetsuro, kunakirwa nenyama ine hutano iyi nekubata kwakakosha. Chokwadi chiri pachena ...
Tsuro negariki, rosemary uye thyme
Nhasi ndinokumbira chikafu chetsuro negariki, rosemary uye thyme. Ndiro rakagadzirwa pamba uye ratogadzirwa naambuya vangu. ...
Yakabikwa Tsuro pamwe nezvinonhuwira
Sevaya venyu vanoverenga ino inonakidza nzvimbo vanoziva mushe, imwe yenyama yandinonyanya kufarira imbira. Iyo yakaderera kwazvo mu ...
Tsuro yakabikwa nemapatatisi
Tsuro yakabikwa nemapatatisi, dhishi risinganetsi kugadzirira, inokurumidza uye yakapusa nzira yekubika. Nyama yetsuro yakanaka kwazvo uye ...
Tsuro ine Prawns
Kamwe zvakare, heino iwe uneni neresipi yakaitwa kubva kune chinongedzo chandinoda, tsuro. Nhasi ndinoda kugovana newe ...
Tsuro neRomesco Sauce
Ini ndinofunga zvave pachena kuti imwe yenyama yangu yandinofarira ndiyo tsuro. Naizvozvo, kunyangwe ini ndichakuunzira mamwe mabikirwo ne ...
Tsuro mumuto nemazai akagochwa
Handizive kana iwe waona kushambadzira paterevhizheni nguva pfupi yadarika icho chinotaura chimwe chinhu sekudya nyama yetsuro chine fashoni. Me…
Tsuro mupineapple muto
Nyama, sehove, chimwe chinhu chakakosha mukudya kwemazuva ese, ndosaka tichitenda kuti kudya zvese chinhu chimwe uye ...
Tsuro yakabikwa negariki uye mbatatisi
Tsuro yakabikwa negariki uye mbatatisi, chikafu chakazara kwazvo chine kuravira kwakawanda. Kudya kwakareruka kwatinogona kugadzirira munguva pfupi, tinogona zvakare ...
Tsuro yakakoshwa ine karoti uye madomasi
Tsuro yakabikwa inzira isingadhuri uye inonaka yekupedzisa menyu yedu mazororo. Haisi nyama inofarira huru ...
Zano rekupisa chizi nyowani
Unogona here kudziisa chizi nyowani? Hongu unokwanisa. Kana iwe wakatenga bhavhu yechizi nyowani yausiri kuzodya, kuitisa chando chinhu chikuru ...
Matipi echando uye mapayi
Kana iwe uri mumwe wevanhu vanofarira kubheka asi vasina nguva yakawanda, izvi zviri kukufadza. Dzimwe nguva tinosvika ku ...
Matipi ekushandisa basil muzvikafu zvako
Basil chirimwa chinonhuwirira chinogona kukura muminda nemapoto. Inogona kudyiwa mbishi kana kubikwa zvishoma, zvikasadaro inorasikirwa ...
Howa hwakagadzirwa nemakoteni
Kugadzira iyi inonaka howa inogadzirwa howa inochengetedza iri gadziriro yakapusa kuita, nekuti haina zvigadzirwa zvakawandisa uye iwe unongofanirwa kugara uchifunga ...
Kakanika koliflower mumafuta
Isu tichagadzirira yakasarudzika makedheni kolifurawa mumafuta kuitira kuti iwe ugone kuinakidza sechinhu chinotapira uye zvakare kuuperekedza nendiro yechikafu chine ...
Inochengetedza howa kana howa
Makedheni howa kana howa mumafuta ndiyo nzira yakapfava yekugadzira uye ivo vanoonekwa nekukosha kwavo kwekudya kwakakwana mupuroteni kubva ...
Makedheni kiwis musirasi
Zvinochengetwa zvakagadzirwa nemichero yechisikigo chikafu chakanakisa chekuti ushandise mukugadzirira dhizeti uyezve kushongedza tarts kana makeke ...
Makedheni mapepa mune manyuchi
Chikumbiro chanhasi ndechekugadzirira makedheni ane hutano yemapeya mune manyuchi, kuve chikafu chakanakira iwe chaunoshandisa mune anotapira rolls, shongedza ...
Makedheni bhero mhiripiri mumafuta
Zvokuchengetedza zvinobatsira zvikuru kugadzirira kugara mufiriji uye kuva nazvo kuti vaperekedze kudya, nekuda kweichi chikonzero isu tichagadzirira imwe ...
INGREDIENTS: Kuti ushandise kushongedzwa kwekushongedzwa kwemadhishi ako zvishoma, unogona kugadzirira iyi yakasvinwa yemagaba mhiripiri. ZVINODZIDZISWA · 14 mhiripiri dzegirini dzakatemwa kuita mitsetse ·…
Madomasi akakamiwa mu brine
Pane dzinoverengeka nguva ini ndakakukurudzira iwe kuti uite dzakasiyana kuchengetedza, asi nhasi ini ndichakudzidzisa iwe kuchengetedza matomatisi mu brine kuitira kuti iwe ugone kuiravira se ...
Kuchengetedza mbatatisi yakasvuurwa
Iwe unoziva here kuchengetedza mbatatisi yakasvuurwa? Chimwe chezvikafu zvinoshandiswa mukicheni mbatatisi. Pasina kupokana, nazvo tichakwanisa kugadzira ndiro zhinji. ...
Yakabikwa drumstick nemapatatisi uye makarotsi
Huku chigadzirwa chine hutano zvakanyanya maererano nehuremu hwekudya. Iyo ine yakaderera kwazvo caloric simba, iyo yaiperekedzwa nemamwe mbatatisi uye ...
Roast huku ngoma
Nhasi tave kuzobika chikafu chinonaka chehuku ichi. Iyo yakabikwa yakazara muchoto uye haina chero yakawedzera mafuta, saka zvinobva ...
Cookies nemukaka chokoreti machipisi
Haisiyo nguva yekutanga kuburitsa muKitchen Recipes nzira yemakuki, makuki akapomberedzwa ayo anowanzo kuve nezvidimbu zve ...
Makuki ane chokoreti, mamwe makuki akanaka kwazvo kuti unakirwe nechikafu chamangwanani kana tudyo nekofi uye nevevana chimwe chezvavanoda. The…
Nutella-izere chokoreti makuki
Isingadzoreki kune wese chokoreti mudiwa. Ndozvakaitawo machokoreti aya akazadzwa neNutella. Makuki anotsemuka nekunze anovanza moyo wakasviba ...
Cookies, American Chokoreti Chip Cookies
Crisp uye ine yakanyanya chokoreti kuravira, aya maAmerican makuki anogadzira chikafu chikuru chekudya kwemangwanani kana tudyo. Iyo yekubheka iri nyore kwazvo ku ...
Une hafu yeawa here? Saka hapana chinotadzisa iwe kugadzirira iri girazi rechokoreti, kirimu uye bhanana izvo zvandinofunga nhasi. Bhomba, hatisi kusiya ...
Girazi rechando uye grenadine manyuchi
Zvisungo: Grenadine manyuchi 400g yekwapu kirimu 300g yesitirio ice cream 200g Vanilla ice cream Strawberries Kugadzirira: Geza uye cheka mumashiti ...
Yogurt mukombe nebhanana, oatmeal uye michero mitsva
Uyu mukombe weiyo yogati nebhanana, oatmeal uye chibereko chitsva chandinofunga nhasi chakakwana pakudya kwemangwanani mukati memwedzi inopisa ye ...
Frozen lemon mukombe ne caramel base uye nzungu topping
Chidimbu chakareba zita, ndinoziva, asi usanyengerwa nazvo nekuti kuzviita kuri nyore kwazvo uye kwave kuri kukunda zvachose. Ndakaedza ...
Ngatiedzei uye edzai dhizeti iyi inonaka: Zvinosanganisa: 2 servings yevanilla ice cream 1 pichisi muchizi yakatemwa Chantilly cream Rollers ...
Yogurt makapu ane peach
Kana iwe uchitsvaga isina nyore dhizeti iyo yekushamisa avo vari pamba, gara wakarongedzwa kune yanhasi recipe. Chakavanzika chemagirazi ...
Yogati, rasipiberi nemikombe yeuchi
Zvinhu zvitatu uye maminetsi gumi enguva yedu ndizvo zvese zvatinoda kugadzira dhizeti iyi. Zvinonzwika zviri nyore handiti? Uye tinogona kuvimbisa kuti ndizvo. The…
Oat flakes ine caramelised bhanana
Ini ndinoda kusanganisa oat flakes nemichero yakasiyana pakudya kwangu kwekuseni. Muzhizha, ndinopenga nehusingaperi hwemichero ye ...
Coquinas negariki newaini
Iyo yekubheka iyo yatinopa nhasi yakanaka kwazvo uye yakajairika mune ino mwaka-wezhizha mwaka, kunyanya kumatra uye mabara mu ...
Coquinas mugariki uye chena waini muto
Iko kune chaiyo Andalusian yegungwa dhishi dhishi yandinonyanya kufarira. Iyo nguva yegore apo inowanzo gadzirirwa iri muzhizha asi ngatiti ...
Zvisungo: 6 zai yolk (s) Sinamoni 500 ml kana cc mukaka 8 wepuniki (s) shuga 2 wepuniki (s) kofi 6 mazai evachena Kugadzirira: Gadzira ...
Yakarohwa artichoke moyo
Yakarohwa artichoke moyo, iri nyore nzira. Ndiro inogona kupihwa sekutanga, yeapitifisi kana tudyo, kana sechifambiso kune vamwe ...
Huchi hwayana ine plums
Mhoroi vanhu vese! Nhasi ndinokuunzira iyo yekutanga uye yakapfuma nzira iyo isingazosiyi vashanyi vako vasina hanya. Gwayana muuchi rine plums ...
Gwayana rine mhiripiri uye mbatatisi
Mapepa apo gwayana ndicho chinhu chikuru senge "anodikanwa" sezvaari "akarambwa." Sei tichidaro? Nekuti inyama ine ...
Gwayana rine Provencal herbs
Gwayana nyama yakakosha. Iko kunhuhwirira kwaro kwakakurumbira, uye kune avo vanoifarira zvakanyanya uye nevasingade ...
Gwayana rakabikwa nemiriwo uye enmental chizi
Zvisungo: 1kg yegwayana 4 madomasi 200g eEmmental chizi 800g mbatatisi 1 hanyanisi Oiri yemafuta omuorivhi Thyme uye mhiripiri Kugadzirira: Svuura matapiri, ...
Gwayana rine howa
Zvisungo: 300g yehwahwa 2 gwayana rinobhururuka Marsala waini 60 g yetirairi 1 clove yegariki 1 girazi rewaini chena Flour Pepper ...
Marimu zvidimbu kana mabhawa
Madhimoni madhiri, sekutonga kwakawanda, ari kundizorodza panguva ino yegore. Iyi yandinokuunzira nhasi zviri nyore kugadzira uye yakawanda ...
BBQ rib nemupunga
Mbabvu inogona kugadzirirwa munzira dzakawanda kwazvo ... Pamwe nzira yandinoda kwazvo yakagochwa, yakarungwa nemimwe mishonga inonhuhwirira uye ichiperekedzwa nemuto wakanaka ...
Mbabvu yenguruve nemasitadhi neuchi
Pane mazuva atisinganzwe kuda kushanda mukicheni. Apa ndipo apo ovhoni inogona kuve mubatsiri mukuru. Kune mabikirwo ...
Marinated mbabvu . Mbabvu dzinonaka dzizere nekunakira kuri nyore kugadzira. Iine spice-based marinade inodiwa nemunhu wese.…
Mbabvu dzakabikwa dzakabikwa, ndiro yakapusa izere nekuravira uko munhu wese achada. Ndiro yatinogona kugadzirira yezororo kana ...
Marinated mbabvu nemapatatisi
Nhasi ticha gadzira dzimwe mbabvu dzakashambidzwa nembatatisi, nekunakirwa kunonaka, mbabvu dzakasiyana dzakazara nekuravira. Iyi recipe ndakapihwa kwandiri ...
Mbabvu dzakakangwa nehwema hwebasil, hunonaka uye hwakanyanya nyore kugadzirira
Nhasi ndinokuunzira kamukira inonaka kwazvo uye iri nyore kwazvo kugadzirira. Mbabvu dzakakangwa dziri, mukuwedzera pakuve dzinonaka, dzine hutano, nekuti dzinoenda chete ...
Mbabvu pamwe nemadomasi nzira yakapusa uye yakagadzirirwa kumba, ine muto wedomasi kunwa chingwa chakawanda. Mbabvu nyama inonaka kwazvo, kune ...
Yakabikwa cedo mbabvu
Yakabikwa nyama yenguruve mbabvu, iri nyore nyore nzira iyo yakagadzirirwa munguva pfupi, inonaka kwazvo muchoto uye nezvinonhuwira ...
Mbabvu yenguruve nedoro
Nyama ine mbatatisi! Iko kusakwana kusingakundike kusanganiswa (haina kukodzera vegans). Ndiani anokwanisa kurwisa iyo orgasmic chiitiko che nyama inonyungudika mumuromo? Vashoma…
Huchi hwenguruve mbabvu, dhishi rakakura uye rakasiyana nemusiyano wemavhenekero ayo vazhinji vachada. Idya iyi yenguruve mbabvu ...
Yakabikwa nyama yenguruve mbabvu
Kana paine chinhu chinonaka munyika yekubika, zviri pachena kuti inguruve mbabvu. Nhasi ndichakupa iwe neakasiyana, mupfumi uye ...
Nguruve mbabvu mumuto
Mbabvu yenguruve muwaini chena, muto wakapfuma wekunyika chingwa. Ini handizive kuti mbabvu dzegorosi dzichava nei, izvo zvinonaka, kunyangwe ini ndisingazvifarire ...
Uchi hwayana mbabvu
Mhoroi vanhu vese! Ungada here nyama yekudyira chimwe chakasiyana? Nhasi ndiri kuzokuudza kuti ungagadzirira sei dzimwe mbabvu dzemakwayana ...
Mbabvu mumuto nematezi
Nhasi ndinofunga ndiro yembabvu mumuto nemupatatisi, yakapusa, yakapfuma uye yakachipa dhishi iyo yatingave takagadzirira pamberi, kunyangwe iri ...
Mbabvu mumuto muto
Mbabvu mumuto muto. Ndiani asingade dzimwe mbabvu dzegorosi? Zvakanaka, iwe une muto wedoro, uchaufarira ...
Jack Daniels Ribhi
Kunyangwe kupisa, kushaya nzara, uye kuda chikafu chitsva, chinozorodza, handina kukwanisa kupfuudza mukana wekugovana ...
Chokoreti coulant, iyo yakanaka dhizeti kune chokoreti vakapindwa muropa. Iyo chokoreti coulant dhizeti inonaka yeFrance mavambo, zviri nyore kwazvo kugadzirira ...
Couscous nemiriwo, dhishi rinokurumidza uye nyore
Cous cous inowanzoitika paMaghreb cuisine, pane chikafu chakakurisa chetsika chinopihwa negwayana, miriwo, maapurikoti akaomeswa, mazambiringa akaomeswa ... Kwete ...
Koliflower uye broccoli couscous
Mhoro #zampabloggers! Ini ndaida chaizvo kugovana newe recipe iyo yakave mhando ye "detox" yekuponesa kuchengetedza ...
ChiCatalan kirimu kana kirimu yaSaint Joseph, dhizeti yechinyakare yeKatalani chikafu chakagadzirirwa zuva raSaint Joseph musi wa19 wa…
Cream ne sage kune muto huku uye pasta
Tichagadzirira nzira yakapfava yekirimu ine sage yakanyatsogadzirwa kuita muto weimwe nyowani kana yakaoma pasita kana chikamu chehuku ...
Nhanga uye ginger cream
Tiri kuenda kunogadzira manhanga uye ginger kirimu. Icho kutonhora kuri pano uye pamwe nayo inodziya spoon madhishi. Kirimu nyoro iyo ...
Basil cream yepasta muto
Isu tichagadzirira nzira yakapfava yebasil cream yakanyanya kugadzirirwa sosi imwe nyowani kana yakaoma pasita yesarudzo yako, iri sarudzo ...
Mufananidzo une mhosva yekuita kuti ndifarire keresipi iyi, kirimu yeselery iyo yandaifunga kuti yaive yakanaka kuwedzera mumenu yangu yemavhiki.
Rice pudding cream, dhizeti yakasarudzika ine bata rakasiyana
Handina kumbobvira ndanyatsofarira mupunga pudding, zvisinei, pandakaona sarudzo yekuzviita neimwe nzira yakati siyanei handina kukwanisa kubatsira ...
Aubergine kirimu kana aubergine hummus. Kunyangwe kirimu iyi ichinyanyo kuzivikanwa kugadzirwa nenjodzi, inogadzirirwawo neayubergines. Iyi kirimu yakajairika ...
Sweet keroti mbatatisi, yakakodzera kamu cream yekudya kwemanheru. Iwo makirimu anobatsira kwazvo, ari nyore uye anokurumidza. Vanodawo madhishi anopisa, ...
Sweet potato kirimu nemukaka wekokonati
Mafuta anobatsira zvakadii. Ivo vakagadzirirwa munguva pfupi kwazvo uye vanova sarudzo yakanaka yekudya kwemanheru panguva ino ye ...
Broccoli uye sipinashi kirimu
Soup uye makirimu mubatsiri mukuru mukicheni kutora mukana kune izvo zvekudya izvo zvava kuda kuenda zvakashata mufiriji. ...
Broccoli uye sipinashi kirimu, chikafu chinonyaradza kwazvo, chakanakira husiku hwechando. Ose makirimu nemasobho ndiwo madhishi ndiro ...
Kirimu ye zucchini, muriwo une hutano uye wakakwana kune vanhu vari pane chikafu, kune vana hwekunaka kwayo kunyoro kana ...
Zucchini ruomba nembatatisi
Kirimu ye zucchini ine mbatatisi chikafu chinonaka chatinogona kugadzirira kudya kwemuchando, sekutanga kana kushandisa miriwo yatino ...
Chiedza zucchini kirimu
Munguva yevhiki ino isu takabheja paKubika Mapepa eakareruka mabikirwo. Madomasi saladhi ayo isu takagadzirira nezuro aive uye zvakare ...
Zucchini cream pasina mbatatisi
Zucchini cream isina mbatatisi, ndiro inodziya uye yakapfuma. Chipunu chakareruka chakanakira kugadzirira kudya kwemanheru kana sekutanga.…
Zucchini uye broccoli cream
Sekukuudza kwandakaita kupera kwesvondo rapfuura, gadheni iri kupa uye takakwanisa kuunganidza zucchini dzakawanda. Izvi zvave kureva kuti panguva ye ...
Zucchini uye apple cream
Zucchini uye apple cream, yakanakira aya mazuva anotonhora, nekuti izvozvi ari kufadza kwazvo. Iwo makirimu anobatsira kwazvo, ari nyore kugadzirira ...
Zucchini uye leek cream
Zucchini uye leek cream. Kirimu yakapfuma yakapusa, yakanakira pakudya kwemanheru yechando, chikafu chinodziya, chine hutano uye chakareruka Musiyano we…
Zucchini uye karoti cream
Kumba tinotora mukana weSvondo kubika. Isu tinoda kugadzirira ndiro yejusi uye imwe kirimu mangwanani kuti igadzikane panguva ...
Zucchini uye karoti cream nehowa
Iro cream ye zucchini uye karoti nehowa yandinotaura nhasi inoratidzika kwandiri sechikumbiro chikuru sekudya kwemanheru. Hapana chinhu chakareruka, uyezve, kupfuura ...
Zucchini, karoti uye kolifulawa kirimu
Muriwo wezvizoro mafuta seichi chinhu chikuru sosi yekupedzisa kudya uye kudya kwemanheru kwemhuri yese. Zviri nyore uye nekukurumidza kuzvigadzirira, mukuwedzera, ...
Iyo yekubheka iyo yatinopa nhasi yakanaka kune avo vanoda kunatsa miviri yavo, vari pane chikafu uye kune avo vese ...
Kaviri "S" Zucchini Soup: Hutano uye Super-yakapusa!
Makirimu anoita senzira yakanaka yekudya miriwo. Chinhu chakanakisa pamusoro pavo ndechekuti vanobvumidza kusanganiswa kusingaperi uye kuti ivo vanoenderana ne ...
Iyo kutonhora kuri kuzvigadzira pachayo kunonzwika munzvimbo zhinji, inova ndiyo nguva yechando, uye izvo zvatinoda kuita kudya kubva mupuni. For the…
Pumpkin kirimu nemaprawuni
Nhasi ndinokumbira kirimu yemanhanga nemaprawuni, kirimu yemiriwo ine hutano, asi nhasi tiri kuzoperekedza pamwe nemamwe machena machena, ...
Pumpkin kirimu ine crispy chickpeas
Svondo rino tembiricha dzadzikira zvakanyanya uye muviri wakakoshesa madhishi anopisa senge iwo manhanga kirimu ane crispy chickpeas uye blueberries atinogadzirira ...
Pumpkin cream ne ginger
Pumpkin cream ine ginger, cream yakatsetseka uye yakapfuma. Kirimu yakanakisa izere nemavhitamini uye inoguta kwazvo. Icho chiri nyore uye chinokurumidza cream ...
Pumpkin kirimu nemaprawuni. Makirimu chikumbiro chakanaka sekutanga kwekudya kwemabiko, iwo akapfava, akareruka uye anodziya, kubvira ...
Chiedza manhanga cream
Kana seni mukati memazuva ekupedzisira usati wamira kuravira maswiti echinyakare akasiyana, pamwe uri kutsvaga chimwe chinhu chakareruka kutanga vhiki rinouya. ...
manhanga uye cream yemapuro
Nungu uye kirimu kirimu, yakapusa uye yakapusa dhishi. Mafuta akakosha echikafu chemanheru anogara achinzwa zvakanaka, idhishi ...
Manhanga Uye Carrot Cream
Isu tiri pakati pemunguva wemanhanga, yakaderera-koriori miriwo izere inononoka-inonaya makabhohaidhiretsi, fiber, zvicherwa, uye mavitamini. Chikafu chakakwana ...
Munguva pfupi yapfuura takaona karoti uye zucchini cream, iri nyore kwazvo kugadzira uye kuti zvimwe kana zvishoma chinhu icho isu tese chatinowanzoita ...
Cream yehwahwa, inotapira yekutanga, inonaka uye ine hutano
Makemikari anodziya kana kutonhora ndiyo yakanaka yekutanga kosi, sekutanga kune yechipiri kosi, inova ndiyo ine kusagadzikana zvakanyanya uye kwakakwirira ...
Vazhinji vedu vane shungu nechokoreti, tichiona hupfumi hwehukoreti uye nekuona kuti unonyungudika sei mumuromo mako iri ...
Cauliflower cream, dhivha uye yakapfava dhishi, yakanakira pakudya kwemanheru kana yekutanga kosi. Isu tinofanirwa kuunza yakawanda cauliflower mune yedu yekubheka bhuku, ...
Koliflower uye curry cream
Unoyeuka here mabikirwo atakagadzira nezuro? Kubva kuholiflower uye karoti saradhi neapuro iyo yandakakurudzira sekuzadza kwemasangweji uye ...
Koliflower uye muto wemaapuro
Takatanga kupera kwevhiki nekugadzirira iripi yakapfava, koliflower uye apple cream izvo zvandinovimba iwe zvichawedzera kune yako yevhiki menyu menyu svondo rino. Nekuti…
Koliflower uye apuro cream, yakapfuma uye inozorodza kirimu yezhizha, yakanaka senge yekutanga kana yekudya kwemanheru. A simple cream...
Koliflower uye turnip cream
Muriwo marimu isarudzo huru sekutanga kune chero kudya. Vanogona zvakare kunakirwa pakudya kwemanheru senge ndiro imwe inosanganisira ...
Koliflower, mbatatisi uye muto weselery
Takatanga kupera kwevhiki nekugadzirira iri nyore uye yakagwinya nzira yekubheka: kerifurawa kirimu, mbatatisi uye celery. Icho chikafu chinokutora iwe ...
Koliflower, karoti uye turmeric cream
Purees uye makirimu chikamu chemenu yangu yevhiki rese gore rese. Kazhinji, ndinovagadzirira kuti vanakidzwe sechikamu chekudya kwemanheru, asi ivowo ...
Nyore chena asperagus kirimu
Pane dzimwe nguva dzaunoda chimwe chinhu chine hutano uye chikasatipa basa rakawanda. Zvenguva idzo isu tine iyi nzira yekubvisa ...
Green asparagus cream, iri nyore kirimu ine yakawanda yekuravira. Makirimu anogona kutorwa kupisa kana kutonhora, ndosaka tichigona kuadya ese ...
Green asparagus uye potato kirimu
Nhasi ndinogadzirira newe kirimu yakanaka yekupedzisa chero kudya kwemanheru. Kirimu yegirini asparagus uye mbatatisi zvakapusa kuita izvo zvinokubatsira iwe ...
Zvinosanganisa 1 mukombe wemashiribheri akachekwa
Pea kirimu nemupunga uye Serrano ham
Zhizha rinongova nemwedzi chete kure uye iwe watove watotanga kudya zvikafu zvishoma kuti urasire mamwe mapaundi ...
Pea kirimu ne yogati
Makirimu uye purees zvinotibvumidza isu kutamba nemazhinji zvigadzirwa. Ivo chikumbiro chikuru kana tichida kutora mukana weichi kana icho chinongedzo chiri kuenda ku ...
Cream yepizi uye mbatatisi
Isu tichagadzirira pea yakapfuma uye iri nyore uye mbatatisi cream. Vegetable creams isarudzo yakanaka yekudya kwemanheru uye…
Nhasi isu tinogadzirira yakapusa howa kirimu muKitchen Recipes. Starter inotangisa yemhuri yese, iyo isingatore yakawanda yenguva yako. ...
Bhinzi yeGreen uye zucchini cream
Iwo makirimu chikumbiro chikuru chekuzivisa miriwo kune vadiki. Iyi yebhinzi yegirini uye zucchini iri nyore kugadzira uye ...
Kiwi uye apple cream
Kiwi uye apple cream, nhasi ndinopa cream yakapfava uye yakatsetseka. Inonaka kwazvo kudya sedhiri kana kuzadza makeke, makuki kana ...
Kurumidza lobster cream
Nhasi ndinopa dhishi randinofunga rakanakira kupa senge yekutanga pane chero masikati kana chisvusvuro mauri kuda kuunganidza shamwari ...
Curried lentil cream nechizi
Mhoro wakanaka! Nhasi ndinokuunzira iri nyore, isingadhuri uye inonaka recipe. Nezvinhu zvina chete zvigadzirwa isu tichaenda kunotora kosi yekutanga yakakodzera tsamba ...
Lemon kirimu, magirazi mashoma ane chinonaka chemoni kirimu yakanaka kune dhizeti. Lemon kirimu iri nyore, inotapira uye inonaka. A…
Mbatata uye leek cream
Mushure mekudya kweKisimusi, ndinowanzo kunzwa sekuda kudya masobho uye mafuta emiriwo kupfuura nakare kose, izvozvo zvinoitikawo kwauri here? Uye kirimu yemazamu ...
Chiedza mbatatisi uye leek cream
Masobho nemafuta anodyiwa kumba gore rese. Idzi inzira huru yekutora mukana wezvinhu zviri kuda kuenda zvakashata ...
Kirimu ye foie paté yekupararira
Kune gadziriro dzakasiyana dzekuparadzira chingwa, mabhisikiti kana toast, uye nhasi chikumbiro ndechekuita kirimu yakapfava ye foie pate kuitira kuti ...
Iyo yakapusa recipe iyo yatichazogadzirira ndeimwe sarudzo, kuratidza ino yakaisvonaka cucumber cream, nekuti inonaka kutambanudza pa ...
Leek uye apple cream
Leek neapuro kirimu chikafu chine hutano uye chinonaka. Kirimu yakapfava uye inodziya, chipunu dhishi kutanga matsutso. Ndiro…
Romanescu cream, iri nyore uye inokurumidza kirimu yekugadzirira. Romanescu muriwo wakafanana pakati pecauliflower ne broccoli, une flavour yakapfava…
Nhasi tinotanga nekirimu yemiriwo. Muriwo marimu kana purees akanaka kuunza iwo miriwo kune vadiki, iwo akapfava ...
Homemade yoghurimu kirimu
Ikozvino neZhizha zvakajairika kuti isu tese tigadzire mutsetse kuti uve wakasviba uye wakagwinya. Kudya kwemanheru kwakanaka kweizvi ...
Carrot uye zucchini cream
Munguva pfupi inotonhora inosvika uye chishuwo chidiki chekubuda pasi pegumbeze, saka iwe unofungei kana tikagadzirira mabikirwo ...
Karoti uye ginger cream
Iyo karoti uye ginger kirimu yatinogadzirira nhasi inonaka uye yakajeka, yakanaka kuwedzera kune yedu yevhiki menyu. Tinogona kuita zvakawanda uye kuomesa iyo ...
Carrot uye leek cream
Nhasi ndinokuunzira karoti uye leek cream, chinonaka chinotanga, chiri nyore kugadzirira masikati kana kudya kwemanheru. Kugadzirira makirimu kuri nyore ...
Inotapira chestnut cream
Inotapira chestnut cream, inonaka yematsutso cream inogona kutapira kana munyu. Ino nguva iyo chestnut cream inotapira, yakanaka kwazvo, yakapusa ...
Cold sipinashi uye avocado cream
Haisi nguva yekutanga kuti tigadzirire sipinachi kirimu muKubika Mapepa, asi kana iri kekutanga nguva isu kuisa avocado mu ...
Nhasi ndinokuunzira inotonhorera cucumber cream, inonaka inotonhorera kirimu kugadzirira sekutanga mazuva ano anopisa. Panguva ino tine ...
Cold cucumber uye avocado cream
Tichagadzirira kirimu inotonhorera kuti tipise kupisa, inotonhorera cucumber uye avocado cream, yakapusa uye inokurumidza Starter. Muzhizha…
Chando chemuzambiringa muchero
Nhasi ini ndinokuratidza imwe sarudzo yekuita ino inonakidza grapefruit kirimu uchishandisa ichi citrus chine hutano sekudya uye nekunakidza sedhiri inotonhorera, uine ...
Chiedza kirimu che zucchini uye leek ine nutmeg
Mwaka wezucchini uri kupa. Imwe yedzakareruka nzira dzekuigadzirira iri mukirimu uye kune akawanda mukana wemubatanidzwa! The cream…
Microwave pastry kirimu
Kurumidza uye nyore pastry kirimu kugadzirira, mune microwave. Nguva zhinji tinoona mabikirwo ane kirimu ekuzadza uye nekuti isu hatizvigadzirire isu hativaite ...
Pastry kirimu ma invoice
Zvisungo: 1 litre yemukaka, 200 magiramu eshuga, 4 mazai, 100 magiramu eupfu, Lemon rind, Vanilla. Kugadzirira: Pisa mukaka ...
Pastry kirimu, ichizadza yemarudzi ese madhiri
Mhoro zvakanaka !! Nhasi kune akawanda marudzi emhando dzakasiyana kana zvasvika pakuzadza madhiri, anotapira kana anonaka, zvinoenderana nekuravira ...
Kurumidza ndimu kirimu
Ini ndinoda kugadzirira madiki magirazi ekirimu yedessert, iwo ane mavara uye akanaka kwazvo kugadzira madhiri ega ega kune yega diner. Saka nhasi ndinokuunzira ...
Vichyssoise cream, inozivikanwawo se leek cream, ndeyechinyakare French kirimu, kirimu inogadzirwa neeek, mbatatisi, hanyanisi, mukaka ...
Cheese uye turkey crepe
Nhasi ticha gadzira imwe chizi uye turkey crepes. Isu tinoziva zvakawanda nezve inotapira crepes pane inonaka, ese mavhezheni akanaka kwazvo. Nhasi uno ...
Mumusika tinogona kuwana mapikicha asingaverengeki akatogadzirirwa, ayo anongoshaya mukaka kana mvura yekuwana crepes ...
Sipinachi uye ricotta crepes
Mushure memafaro tinoenda nemabikirwo ane hutano hushoma, mamwe makepisi akazadzwa nesipinashi ne ricotta chizi. Rakareruka uye yakapusa nzira yatinogona ...
Mazai asina mazai
Isu tese tinoda crepes! Uye izvi ndizvozvo nekuti tinogona kuzviita nenzira churu. Zvakanaka kumba tinoda yakawanda crepes ...
Savory huku nezai crepes, kudya kwemanheru kwakanaka
Artisan crepes inogona kugadzirwa mumhando mbiri, ndiko kuti, munyu kana kutapira. Zuva rekupedzisira takakudzidzisa maitiro ekugadzira crepes yakazara ...
Ini kazhinji handibike chinhu chinotapira uye ini handizive zvinoitika kwandiri nemhando idzi dzeresipi. Ini ndinogona kugadzira chero salty recipe neziso ...
Zvishongedzo 100g yemafuta akanyungudika Crispy bhanana 100g yeoats akakungurutswa 2 mabhanana 4 tbsp yeshuga tsvuku 4 tbsp yedulce de leche ...
Iyi iresipi yakapfuma yekushandura makuki echinyakare uye toast uye nekupa iwe pachako kubata kwako kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya
Chokoreti yakazara croissant
Chokoreti yakazadzwa macroissants se dessert kana snack yakanaka. Zvakareruka kwazvo kugadzirira, isu tinongofanirwa kuve necuff pastry uye chokoreti. Iwo macroissants ...
Homemade tsuro macroquettes
Takatotaura newe pane dzimwe nguva nezvekukosha kwazvinoita kudzokorora chikafu chatakasiya kubva kumazuva apfuura, kugadzira mamwe mabikirwo ...
Zvigadzirwa zvepamba zvinogadzira uye matanda egungwa
Croquettes chikafu chinodiwa nevana, asi chinowanzo gadzirwa kubva kuhuku kana nyama, zvasara kubva muhari ye ...
Makorokoreti ekukohwa akanaka kwazvo. Izvi zvandinofungidzira zvinogadzirwa kubva kune nyama yakabikwa, ndinofarira kuwedzera huku yakawanda kana ndichigadzirira ...
Sweet mupunga croquettes
Zvisungo 1 mukombe wemupunga wakashambidzwa 1 mukombe weshuga 2 mazai 2 makapu emukaka 1 kapu yemvura 1 mukombe wechingwa ...
Tuna croquettes, anonaka macroquettes atinogona kugadzirira seanofadza kana anoperekedza. Ivo vakanakira vana, vanoifarira zvakanyanya uye saka tinogona kuvagadzira ...
Tuna uye macarrotte emakaroti
Croquettes chinonaka chevamwari kune vese vana, vanovada. Uye zvakare, ivo vanoita zvakasiyana-siyana uye, nenzira iyi, tinogona kusuma ...
Croquettes, kunze kwekufarirwa neanenge munhu wese, inobvuma akawanda musanganiswa wezvisanganiswa. Ivo vanotibvumidza isu kutora mukana wezvasara zvezvimwe zvekugadzirira kana chikafu chiri nezve ...
Howa neeketi macroquettes
Croquettes inyanzvi yakanaka sekutanga kana iwe uine vaenzi. Ivo vanogona kugadzirirwa pamberi, chando uye kutorwa kunze kwenguva pfupi vasati vatsva ...
Chorizo ​​uye croquettes emupunga, shandisa recipe
Croquettes anogara ari akapfuma kwazvo chikafu chemhuri yese, kungave kubva kudiki kusvika kune mukuru kwazvo. Uye zvakare, ivo vakapfuma ...
Zvigadzirwa zvemumba zvakagadzirwa
Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvekuzvigadzirira zvakagadzirwa mumba, mazuva mashoma apfuura raive zuva recroquette ini ndinotora mukana wekukuratidza maitiro andinovagadzira. Ndinotenda kuti munhu wese ...
Sipinachi uye cheese macroquettes
Sipinachi uye cheese macroquettes. Zvakapfuma uye zviri nyore kugadzirira. Croquettes inozivikanwa kwazvo, inogona kugadzirwa nezvose zvaunoda, tora mukana wezvasara, nyama, ...
Makokoreti ehuku kuti atore mukana wehudyu dzeakadya
Nguva yechando iri kuswedera uye pamwe nayo mwaka wemaboth uye consommés. Kumba tinogara tichiedza kuve nebhodhoro remuto mu ...
Shrimp uye howa macroquettes
Croquettes ndechimwe chezvandinofarira zvekudya kwevana sezvo zviri nyore kwazvo kugadzira uye zvine mutsindo. Izvi…
Shrimp uye coriander croquettes
Hauzive zvekuita pakudya uye iwe waneta nekugara uchidya ndiro imwechete? Nhasi ndinokuunzira rakareruka uye rakasiyana risipi, mamwe ...
Chickpea croquettes, shandisa recipe
Kune misiyano mizhinji mukugadzira kake yakanaka yemakotekesi, kutaura zvazviri, ini ndagadzira kare iwe nehuku nehuku, ham ne béchamel.
Heura croquettes inofadza. Heura inyama yemuriwo inogadzirwa nesoya beans inonaka sehuku.…
Mazai uye macroquettes e tuna
Zuva rekupedzisira takakudzidzisa maitiro ekugadzira cannelloni ine hutano neai yakabikwa uye tuna uye, sezvo pasina chakaraswa mukicheni, ...
Homemade ham macroquettes
Homemade ham macroquettes, anonaka uye ari nyore kugadzirira. Iyo croquette ndeye yekubheka inobatsira iyo inogona kugadzirwa nezvese uye ivo vanogara vachinaka. Kunyangwe riini…
Serrano ham uye macroquettes echizi
Nhasi tiri kuzogadzira imwe serrano ham uye cheese macroquettes. Makoroketi anonaka, ane muto kwazvo uye ane hwema hwakawanda. Iyo ham croquettes uye ...
Hamu uye akaomeswa-akabikwa mazai emakwati
Hamu uye akaomeswa-akabikwa mazai macroquettes. Icho chinhu chakanaka chekuvhiya, iyo tapas isingashaikwe mune chero bhawa, zviri nyore kwazvo kugadzirira. nesuwo…
Homemade mussel croquettes
Homemade mussel croquettes, inonaka kudya chero nguva se tapas kana Starter. Zvakajairika mune akawanda matepi mabhawa. Kana iwe uchida kushamisika yako ...
Yakasanganiswa mussel croquettes
Dzimwe nguva, isu tinotenga hombe kumba uye kana zvikafu zvapera, tinoona diki gaba rekuchengetedza iro rakagadzirira ...
Panga macroquettes ane béchamel muto
Croquettes chikafu chinodiwa nevana, uye kwete kudaro vana zvakare. Iyo mukanyiwa weiyi recipe unogona kuva ...
Mbatata makatekesi negariki uye parsley
Anonaka uye anotapira macroetet ane garlic uye parsley. Mamwe macroquette ayo madiki nevakuru angade zvakanyanya. Isu tinogona zvakare kuvagadzirira kubva ...
Mbatata uye parmesan croquettes
Mbatatisi neParmesan croquettes, zviri nyore kugadzirira, tinogona kuzviita sedhishi rakaperekedzwa nesaladi, kuperekedza nyama, hove kana se ...
Croquettes ndeimwe yeakakurumbira madhishi evana. Izvi ndezvechinyakare uye zvine mutsindo sezvo iri nyore nzira ...
Hove croquettes, yakapusa uye yakapfuma kugadzirira. Aya makoteti ndeekushandisa, akagadzirwa nehove, akanaka kwazvo uye ndinowanzoagadzirira ne ...
Hove croquettes, garlic uye parsley
Hove croquettes, gariki uye parsley, inonaka uye iri nyore kugadzira, yakanakira kusuma hove. Tinogona kuita kuti zvive zvinobatsira. Ivo isarudzo yakanaka ...
Homemade huku croquettes
Croquettes chimwe chinhu chakanyanya kuitika muna ambuya, uye nechikonzero chakanaka! Navo tinogona kutora mukana wezvakawanda zvakasara zvatinazvo kubva kune chimwe chikafu senge ...
Nyuchi, ham uye béchamel croquettes, kuruma kwegumi
Kupera mwedzi uno waMarch uye kupa kugamuchirwa kukuru kumwedzi waKubvumbi, ndakagadzirira zvinonaka zvekudya zvehuku, ham uye ...
Pringá croquettes, shandisa recipe
Croquettes chikafu chakasiyana-siyana chekushandisa, nekuti chinogona kugadzirwa kubva kune howa, huku, nyama yemombe, miriwo, nezvimwe. Ari…
Chirevo chanhasi ndechekugadzirira zvakapfava uye zvinofadza macheti eetetroot kuti inakidzwe senge inotanga kupisa kana kuperekedza madhishi ane ...
Yakabatanidzwa howa macroquettes
Zvikuku zvehuku, shrimp croquettes, goo croquettes ... isu takabika mhando zhinji dzemakeke muKubika Mapepa. Nhasi anokukoka iwe kuti ugadzirire macroquettes e ...
Mushroom uye cheese macroquettes
Croquettes anogara ari hombe zviwanikwa sekutanga. Tinogona zvakare kuzvigadzirira nezvinhu zvakawanda, tichitora mukana wezvakasara zveimwe gadziriro senge masobho kana stew. Nhasi…
Baked miriwo macroquettes
Kuronga menyu yevhiki nevhiki yemhuri yese inogona kuve inonetesa uye yakaoma basa, kunyanya kana zvasvika pakufunga nezvekudya kwemanheru. The…
Croquettes kubva mudiro
Pane dzakawanda nguva, isu tine nyama yakasara kubva muhari kana yakabikwa, zvinova zvinonyadzisa kurasa nekuti inogona kushandiswa kugadzira imwe ...
Crostata ine medlar jam
Mazuva mashoma apfuura ndakaenda kumunda ndikaunza bhegi remidziyo, ndakanga ndisingazive zvekuita navo uye zvakandifungira kugadzirira jam. ...
Crostini nemadomasi uye parmesan, iri nyore appetizer
Crostini chisviniro chikuru kana uchishandiswa newaini yakanaka. Inosanganisira zvidimbu zvidiki zvechingwa chakabikwa kana chakakangwa, ichi ...
Tomato, chizi uye basil crostinis
Kunyangwe mamiriro ekunze achiri kutonhorera, mwenje wezuva unotoita kuti tinzwe pakati pechirimo uye tinoda kudya nemavara mazhinji. Saka…
Crosto: Puff Pastry Timbale neMacaroni
Semutemo wakajairika ini ndinogovana newe mapepepeti akareruka ekugadzira, yanhasi haina kunyanya kuomarara asi ine zvinhu zvayo. Inodanwa…
Crudités nebhuruu cheese muto
VaCrudités vanogona kuva shamwari yedu iri nyore kumhuri kana kushamwari masikati kana kudya kwemanheru. Uye isu tinongofanirwa kuve nemiriwo ...
Peanut inotapira uye pistachio
Izvo zvinonzi, zvinonzi, kudya kwekuseni ndiko kwakanyanya kukosha kudya kwezuva. Inofanira kunge iri imwe yechokwadi ichocho icho ...
Yakamomarara Yogati neBanana
Mushure mekutarisa iwo ese mabikirwo atanga tichigovana, ini ndinoona kuti ndine mashoma madhiri uye ndiko kudya ...
Nhasi nzira yekudzokorora zvishoma. Rimwe zuva ndakaita mupunga wakabikwa kuti ushandise nemadomasi uye ndaive nemupunga wakasara, saka ...
Crispy miriwo ine mbudzi chizi
Razvino recipe, crispy miriwo ine mbudzi chizi, iri nyore kwazvo uye inokurumidza kutanga kana tapa kugadzirira. Tine zano ...
Kwakatangira ino inokurumidza uye yakapusa keke inotapira inobva kuEngland. Kekutanga patakaiyedza, yaive mumaoko ehanzvadzi yedu Rosa ...
Haisi nguva yekutanga isu kugadzirira kuputsika muKitchen Recipes. Isu takavaedza nema strawberries, peya uye chokoreti ... Tinovada, wadii ...
Peya uye chokoreti zvinoputsika
Ini ndinoda aya marudzi emadhizeti, akagadzirwa nezvakajairwa zvinongedzo uye zvakapusa kuita. Iyo pear uye chokoreti kupunzika ingori imwe ye ...
Puff pastry zvikwere
Puff pastry zvikwere. Kana iwe uchida madhiri akareruka izvi zvakanaka, zvakapusa uye zvakanaka kwazvo. Iyi ndiyo nzira inoenda chaizvo ...
Curd neuchi, chinyakare mabikirwo
Ini handisi mugadziri weiyi dhizeti, asi kana ini ndikanyora pasi inoenderana nhanho nhanho kugadzirira iyi recipe uye zvakanyanya kukosha, ini ndaive ...
Chokoreti yakafukidza Cubanitos
Ini ndinokupa iwe inoshanda nzira yekuita madiki machubhu akanyikwa muchokoreti, kuti ubude mumatambudziko apo mudiki wemba anoda chimwe chinhu chako ...
Chokwadi pane imwe nguva iwe unenge watendeukira kune yakasarudzika broth mahwendefa ayo, pasina kupokana, anopa kwakasiyana kubata kune edu madhishi asi chii chatinogona ...
Yakabatanidzwa makeke, akakodzera Zuva reValentine
Zuva rakasarudzika riri kuswededza reromantics, kune vanoda, rerudo: Zuva reValentine! Uye kubva Kubika Mapoka tafunga kuti pamwe ...
Prawn curry, yechinyakare Indian dish yauchazoda zvakanyanya. Curry inonhuwira ine yakawanda kuravira, yatinogona kushandisa kugadzirira akawanda ...
Chickpea uye sipinashi curry
Mhoro wakanaka! Ndinoreurura, ndadzokera zvakare kupindwa muropa nezvinonhuwira. Saka sezvo ini ndiri kunyanya nezve 'kugovana kuri kurarama' nhasi tinopinda ...
Mbatatisi negirini bhinzi curry
Kana iwe uchida curry sezvandinoita, iwe uri mune rombo rakanaka! Nhasi tagadzira mbatatisi uye girini bhinzi curry yandaiziva kuti ichave ...
Nhasi tichaenda kubika nzira yakapusa ne turkey fillet, nyama yakanaka yemhuri yese nekuda kwemafuta ayo mashoma. Chii chimwe,…
Green hove curry
Kunyangwe iwe uchinzwisisa curry sechishamiso chechisere chepasi, kana kana iwe uchida kuisa chishuwo kune yako ndiro kuti umutsiridze hukama hwako ...
Couscous ane squid muingi yayo
Kumba, couscous rave kadhi remusango kutora mukana zvasara kubva zuva rapfuura. Mune ino kesi yaive squid mu ...
Couscous ane nyama pamwe nemadomasi
Couscous ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa kana nguva ipfupi. Zuva ratangira kugadzirira nyama muto, nechidimbu che ...
Couscous pamwe nehanyanisi, zucchini uye edamames
Iyo 'realfooder' yekufambisa yagadzira edamames mufashoni. Gore rapfuura vazhinji vedu tanga tisingazive nezve kuvapo kweaya anozivikanwa esosi nyemba mu ...
Couscous neholiflower uye madomasi
Couscous yakapusa uye inokurumidza kugadzirira; sosi yakanaka kana iwe usina nguva kana chishuwo chekugadzira chero chinhu mukicheni ...
Couscous ane chickpeas uye nyama yegwayana
Kana iwe uchitsvaga yakakwana dhishi, iyi haizokuodza moyo iwe. Iwo macouscous ane chickpeas nenyama yegwayana yatinogadzira nhasi idyo yakanaka mu ...
Couscous ane zukini matanda uye mazambiringa akaomeswa
Hauna nguva yekubika? Necheji iyi, nguva haifanire kunge iri pembedzo. Zvakatora maminetsi gumi nemashanu kugadzirira iyi hama nemitanda yezucchini ...
Maitiro andinofarira mabikirwo seaya andinogovana newe nhasi. Mapepa akareruka anotibvumidza isu kudya zvine hutano kunyangwe tiine nguva shoma kana ...
Couscous ane howa uye manhanga
Couscous inonyanya kuita mabasa akawanda; Tinogona kuishandisa zvese mumasadhi uye mumidziyo inopisa. Uye zvakare, uchipiwa kumhanya kwainobika nako kwakanaka ...
Couscous pamwe nemadomasi nemaorivhi matema
Iyi ndeimwe yeaya akareruka-kugadzirira mapikicha iwe aunogona kutendeukira kwauri kana iwe usinga nzwe sekubika. Iwo mukoma pamwe nemadomasi uye ...
Couscous ne turmeric yakakangwa miriwo
Ini ndinoda sei aya marudzi eeresipi panguva ino yegore! Miriwo yakabikwa chikamu chemamenyu angu gore rese, ...
Huku couscous nemiriwo
Chishanu choga choga hama dzinogadzirirwa muMorocco, mhuri inoungana uye ivo vese vanodya pamwe chete vakatenderedza ndiro imwechete. Kunyangwe ichigona kuperekedzwa ne ...